စွဲလမ်းမှုအတွက် mesocorticolimbic system တွင် glutamatergic synaptic plasticity (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn On
စွဲလမ်းအတွက် mesocorticolimbic စနစ် Glutamatergic Synaptic plasticity (2015)
တပ်ဦးဆဲလ် neuroscience ။ 2015 ဇန်နဝါရီ 20; 8: 466 Doi: 10.3389 / fncel.2014.00466 ။ eCollection 2014 ။
ဗန် Huijstee AN ။1, Mansvelder HD ကို။1.
စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် glutamatergic synapses ၏ကျယ်ပြန့်သောအလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်ဖြစ်သော mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စွဲ၏ဇွဲနှစ် ဦး စလုံးအထောက်အကူပြုရန်ထင်နေသည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ကအားဖြင့်သွေးဆောင်နေသော synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ Vivo အတွက် စွဲလမ်းနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ဤဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic အပြောင်းအလဲများသည်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုများရှိသော်ငြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ အစပိုင်း၌စွဲလမ်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် ventral tegmental (ရိယာ (VTA) တွင် Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ VTA ၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့်အတူ mesocorticolimbic system ၏အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် synaptic အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့်အတူ prefrontal cortex (PFC) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကား glutamatergic synaptic ပွောငျးလဲထို့နောက်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာသောအမူအကျင့်လက္ခဏာတွေအများအပြားဖျန်ဖြေဖို့ထင်နေကြသည်။ NAc နှင့်အထူးသဖြင့် PFC တွင် glutamatergic synaptic plasticity ၏နောက်ဆက်တွဲအဆင့်များသည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ PFC ၏ glutamatergic ဆားကစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်လူကြီးဘဝတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပြီးထာဝရတည်မြဲသောအားနည်းချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထုတ်လုပ်သောဤ neurobiological အပြောင်းအလဲများသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်အလားအလာရှိသောကုသနည်းမဟာဗျူဟာများအတွက်အသစ်သောပစ်မှတ်များမည်သို့ပေးနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်။
keywords: စွဲ, အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး, synaptic ပလပ်စတစ်, အချိုမှု, dopamine, ventral tegmental areaရိယာ, နျူကလိယ accumbens, prefrontal cortex
အချိန်ကြာမြင့်စွာစွဲခြင်းကိုစွဲလမ်းမှုကိုရောဂါတစ်ခုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ခံယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုနေရသူများအတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုနည်းဗျူဟာများရှာဖွေရန်ကြိုးစားမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းလူတို့သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း၊ စွဲလမ်းမှုသည်နာတာရှည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ DSM-5 (American Psychiatric Association) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစွဲခြင်းသို့မဟုတ်“ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုရောဂါ” ။ 2013), အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များနှင့် relapse နှုန်းမြင့်မားနေသော်လည်းအတင်းအကျပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရခန့်မှန်းခြေ 27 လူ ဦး ရေသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၊ ကိုကင်း၊ ဆေးခြောက်နှင့်အမ်ဖီတမင်းများနှင့် 1 အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းသေဆုံးမှုများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုရုံး၊ 2014) ။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်တိုင်းပြည်များရှိတရားမဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲမှု၏လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်သည်2ရှိစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ 2004% ခန့်ရှိသည်ဟုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခန့်မှန်းသည်။ 2008) ။ ဤကုန်ကျစရိတ်အများစုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွှယ်သောရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဥရောပမူးယစ်ဆေးဝါးရှုခင်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအတော်အတန်တည်ငြိမ်နေသော်လည်းဥရောပတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်သမိုင်းဝင်စံချိန်စံညွှန်းများအရမြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည် (EMCDDA, 2013) ။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းစသည့်လူမှုရေးအရလက်ခံထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သေဆုံးမှုများသည်ကြီးမားသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရဆေးရွက်ကြီးသည်နှစ်စဉ်6သန်းနီးပါးခန့်သေဆုံးပြီး 3.3 သန်းနှစ်စဉ်လူတို့သည်အရက်ကိုအန္တရာယ်များသောကြောင့်နှစ်စဉ်သေဆုံးကြသည်။ ၎င်းသည်အရက်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါများအကြားတွင်ဖြစ်ပေါ်စေသောဆက်စပ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပေ (Volkow နှင့် Li, 2005) ။ အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်ကမ္ဘာ့စွဲစွဲလမ်းမှုသည်ကြီးမားသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လက်ရှိမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက်ကုသမှုများသည်ထိရောက်မှုမရှိသေးပါ။ ကုသမှုနည်းဗျူဟာများတိုးတက်စေရန်ဆေးစွဲမှု၏အခြေခံဖြစ်သော neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
စွဲလမ်းမှု၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ဦး နှောက်၏ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု (သို့မဟုတ်) ပို၍ တိကျစွာ mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်သည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်ကိုကောင်းစွာသိထားသည်။ အဆိုပါ mesocorticolimbic system ကို ventral tegmental (ရိယာ (VTA) နှင့် VTA ထံမှစီမံကိန်းများက innerverved ဦး နှောက်ဒေသများ, ဥပမာနျူကလိယ accumbens (NAc), prefrontal cortex (PFC), amygdala နှင့် hippocampus (Swanson, ပါဝင်သည်) 1982) ။ mesocorticolimbic စနစ်သည်ဆုနှင့်အားဖြည့်ခြင်းအပြောင်းအလဲ၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသည် (Schultz, 1998; ပညာရှိ 2004) ။ စွဲလမ်းစေသောဆေးများအားလုံးသည် mesocorticolimbic system ပေါ်တွင်ပြုမူပြီးဤစနစ်တွင် DA အဆင့်တိုးမြင့်သည် (Di Chiara နှင့် Imperato၊ 1988) ။ ကွဲပြားခြားနားသောဆယ်လူလာယန္တရားများမှတစ်ဆင့်အမျိုးမျိုးသောဆေးများသည် mesocorticolimbic DA အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ နီကိုတင်းသည်α4β2ပါဝင်သောနီကိုတင်း receptors များမှတဆင့် VTA DA အာရုံခံများကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် DA အဆင့်ကိုတိုးပွားစေသည် (Maskos et al ။ , 2005) ။ benzodiazepines, opioids နှင့် cannabinoids ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများသည် VTA တွင် GABAergic Interneurons များကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအားပေးပြီး DA neuron များ (Johnson နှင့် North, 1992; Szabo et al ။ , 2002; Tan က et al ။ , 2010) ။ ထိုကဲ့သို့သောကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းကဲ့သို့သောစိတ်စိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးများသည် DA Transporter နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြင့် extracellular DA အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် DA ပြန်လည်စားသုံးမှုကိုတားဆီးနိုင်သည် (Williams နှင့် Galli, 2006) ။ mesocorticolimbic DA အဆင့်တိုးခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ထုတ်ပြီး DA DA အဆင့်များပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်စွဲလမ်းမှုတွင်တွေ့ရသောကြာရှည်တည်တံ့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံမှန်မဟုတ်မှုများကိုရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဖော်ပြချက်သည် mesocorticolimbic စနစ်တွင်ကြာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော neuroadaptations ကြောင့်ဖြစ်သည်။
စုဆောင်းရရှိသောအထောက်အထားများအရမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်အတွင်းကြာရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲများကိုအမှန်ပင်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် mesocorticolimbic system တွင် synaptic transmission ကိုပြုပြင်သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Synaptic plasticity လို့ခေါ်ပါတယ် (Lüscher and Malenka, 2011) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် synaptic ပလပ်စတစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Vivo အတွက် အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့။ အမျိုးမျိုးသော synapses အမျိုးအစားများကိုစွဲလမ်းစေသောဆေးများဖြင့်ပြုပြင်သော်လည်း၊ စွဲလမ်းစေသောဆေးများသည်အဓိကအားဖြင့် glutamatergic transmission (Lüscher, 2013) ။ ထို့အပွငျ, glutamatergic ဂီယာ၏မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်ကျယ်ပြန့်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤအ Synaptic လိုက်လျောညီထွေများနောက်ကွယ်မှဘုံယန္တရားများနှင့်မည်သို့ဤမူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင် Synaptic အပြောင်းအလဲများစွဲအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှအထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အတူ glutamatergic ဂီယာ၏မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်အပေါ်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ၌ Synaptic ပလပ်စတစ် (VTA)
မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကိုပထမအကြိမ်တွေ့ရှိပြီးနောက် synaptic ဂီယာပြောင်းလဲမှုသည်ပြီးသားဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်း။ Vivo အတွက် တစ် ဦး စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့သည့် VTA ၏ DA အာရုံခံပေါ်သို့ glutamatergic synapses မှာ synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုတစ် ဦး တိုးလာသည်။ ကိုကင်းတစ်မျိုးတည်းကိုမပါ ၀ င်သောဆေးထိုးပေးခဲ့သည်။ Vivo အတွက် ကြွက်များနှင့်ကြွက်များနှင့် 24 ဇမှ, စိတ်လှုပ်ရှား postynaptic ရေစီးကြောင်း (EPSCs) synaptic အစွမ်းသတ္တိအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဤတိရိစ္ဆာန်များ၏ midbrain ချပ်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့ကြသည် (Ungless et al ။ , 2001) ။ VTA DA အာရုံခံတွင် AMPAR- နှင့် NMDAR-mediated EPSCs (AMPAR / NMDAR အချိုး) ၏အချိုးသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤသည်တိုး AMPAR ရေစီးကြောင်းတစ်ခုတိုးတစ်ခုသို့မဟုတ် NMDAR ရေစီးကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးပေါင်းစပ်အတွက်ကျဆင်းခြင်းရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာ AMPAR ရေစီးကြောင်းများတိုးလာခြင်းနှင့် NMDAR ရေစီးကြောင်းများလျော့နည်းလာခြင်းတို့သည်နှစ် ဦး စလုံးပေါ်ပေါက်လာပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲပြီးနောက် AMPAR / NMDAR အချိုးတိုးလာစေသည်။ Ungless et al ။ (2001) AMPAR -mediated သေးသေးလေး EPSCs (mEPSCs) ၏လွှဲခွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုလုံးသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့ကြကတည်းက AMPAR ဂီယာ, VTA ၏ DA အာရုံခံပေါ်သို့ glutamatergic synapses မှာတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည် Vivo အတွက် ကိုကင်းထိတွေ့မှု။ AMPA-neurons များကို AMPA ဖြင့် exogenously လျှောက်ထားသောတွေ့ရှိချက်များက ထပ်မံ၍ ၎င်းကိုဆားဖြင့်ထိုးသွင်းထားသောကြွက်များမှအချပ်များထက်ကိုကင်းဆေးရရှိခဲ့သည့်ကြွက်များမှအချပ်များ၌ပိုမိုကြီးမားသော AMPA-induced currents များဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ AMPAR-mediated current မ်ား၏ကိုကင်း - ကာလရှည်အာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းကို VTA ၏ DA အာရုံခံများအတွက်တိကျကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဘယ် potippation ကို hippocampus သို့မဟုတ် VTA ရှိ GABA အာရုံခံတွင်မတွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုကင်းသည် NMDAR ရန်သူနှင့်ပူးတွဲအုပ်ချုပ်သည့်အခါ AMPAR / NMDAR အချိုးတိုးခြင်းသည် AMPAR / NMDAR အချိုးတိုးခြင်းသည် NMDAR သက်ဝင်မှုအပေါ်မူတည်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့မှုတစ်ခုတည်းသည် NTAD - မှီခိုသောရေရှည်စွမ်းရည် (LTP) နှင့်ဆင်တူသည့် VTA DA အာရုံခံဆဲလ်များပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော synapses များတွင် synaptic plasticity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအချက်နှင့်အညီ, မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic plasticity ဤပလပ်စတစ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးအခြေခံယန္တရားများဝေမျှအကြံပြုခြင်း, နောက်ဆက်တွဲ LTP ပါဝင်သည် (Ungless et al ။ , 2001; လျူ et al ။ , 2005; Argilli et al ။ , 2008; လူလူနှင့်မာလင်ကာ 2008).
၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက်။ Vivo အတွက် ကိုကင်း - သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်ကြောင့်အခြားအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ VTA အတွက် excitatory ဂီယာအတွက်တူညီတဲ့အပြောင်းအလဲများထုတ်ယူခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ မှ။ စသည်တို့အတွက် လေ့လာမှုများအရနီကိုတင်းပမာဏအနည်းငယ်သာသုံးစွဲခြင်းသည်ပင် VTA DA အာရုံခံများ (Mansvelder နှင့် McGehee၊ 2000), ဒီစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့။ အမှန်စင်စစ်ယနေ့အထိစမ်းသပ်သုံးစွဲသောမူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံး (မော်ဖင်းအကိုက်၊ နီကိုတင်း၊ ဘန်ဇီဒီးဇက်ပင်းများနှင့်အီသနောတို့တွင်) သည် VTA DA အာရုံခံဆဲလ် 24 h တွင် AMPAR ဂီယာ၏အလားအလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Vivo အတွက် တစ်ခုတည်းဆေး၏အုပ်ချုပ်မှု (Saal et al ။ , 2003; Tan က et al ။ , 2010) ။ AMPAR / NMDAR အချိုးအစားများအပြီးတိုးမြှင့်မခံခဲ့ရပါ။ Vivo အတွက် non- စွဲလမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ fluoxetine နှင့် carbamazepine ၏အုပ်ချုပ်မှု (Saal et al ။ , 2003) ။ ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးအတန်း, လုပ်ဆောင်ချက်၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးယန္တရားများနှင့်အတူ, VTA DA အာရုံခံအတွက် synaptic plasticity ၏အလားတူအမျိုးအစားသွေးဆောင်ဆိုတဲ့အချက်ကို synaptic ပလပ်စတစ်၏ဤပုံစံသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်အယောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တိုးမြှင့် AMPAR / NMDAR အချိုးအခြေခံယန္တရားများသို့နောက်ထပ်သုတေသနမူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင် Synaptic plasticity များအတွက်လိုအပ် NMDAR-activation DA D ကို၏ stimulation မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်5 အဘယ်သူမျှမကိုကင်း - သွေးဆောင် potentiation တစ် D ကို၏လျှောက်လွှာပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်ကတည်းက receptors ။1/D5 အဲဒီ receptor ရန်သို့မဟုတ်: D ။5 receptor နောက်ကောက်ကြွက် (Argilli et al ။ , 2008) ။ နီကိုတင်း - သွေးဆောင် Synaptic plasticity ။ စသည်တို့အတွက် ထို့အပြင် DA: D ပေါ်တွင်မူတည်သည်။5 receptors (မော်စီတုန်း et al ။ , 2011) ။ တိုးမြှင့်ထားသော AMPAR ဂီယာကို GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs အားအောက်ပါအချက်အလက်များအရ synapses ထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Vivo အတွက် စွဲလမ်းစေသောဆေးများ (Bellone နှင့်Lüscher, 2006; Argilli et al ။ , 2008) ။ Fitzgerald et al မှအစောပိုင်းအလုပ်။ (1996) ပြီးသား VTA ၏ DA အာရုံခံပေါ်သို့ glutamatergic synapses မှာမူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်ပလပ်စတစ် GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs မှတစ် ဦး switch ကိုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအရိပ်အယောင်။ ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် GluA1 subunits များ၏ဖော်ပြမှု, ဒါပေမယ့် GluA2 subunits ၏ဖော်ပြမှု, VTA DA အာရုံခံအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် (Fitzgerald et al ။ , 1996) ။ GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs, Bellone နှင့်Lüscherသို့ပြောင်းသောတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားကိုရှာဖွေရန်2006) GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs ၏ကွဲပြားဇီဝရူပဗေဒဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPAR များသည် Ca ဖြစ်သည်။2+-permeable၊ သာလွန်သော conduance ရှိခြင်းသည်အတွင်းပိုင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် polyamines (Washburn နှင့် Dingledine) တို့ဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။ 1996; Isaac et al ။ , 2007) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးတွင် AMPAR-mediated EPSCs ၏ပြင်ဆင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး polyamine အဆိပ်အတောက် Joro ပင့်ကူအဆိပ်အတောက် (JST) ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုကိုကင်းကုသသည့်ကြွက်များတွင် AMPAR-mediated EPSCs ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs (Bellone နှင့်Lüscher, 2006) ။ ဤရွေ့ကား receptors လက်ရှိ GluA2-ပါဝင် AMPARs ၏ရေကန်၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြည့်စွက်နိုင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ synapses စဉ်ဆက်မပြတ်မှာ AMPARs စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, GluA2 ပါဝင်သည်အဲဒီ receptors အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ GluA2 subunits များ၏ Immunogold တံဆိပ်ကပ်ခြင်းက GluA2 ပါ ၀ င်သော AMPARs ၏ cytoplasmic pool ကိုကင်းသည်ထိတွေ့ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Mameli et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် GluA2 ပါဝင်သည့် GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs နှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs ၏ single-channel စီးကူးမှုကြောင့် AMPAR ၏ဂီယာကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
မူလက, VTA DA အာရုံခံအတွက် AMPAR-mediated ဂီယာ၏မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်အစွမ်းထက်သတင်းပို့ကြောင်းလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှုအပြီး 24 ဇဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုအောက်ပါ synapses ခိုင်မာ၏အမှန်တကယ်အချိန်သင်တန်းကဘာလဲ Argilli et al ။ (2008) AMPAR စွမ်းရည်မြှင့်3ဇ (Argilli et al ။ , ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရှာတွေ့ကတည်းကကတည်းက, Synaptic plasticity, ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအုပ်ချုပ်ရေးအပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ 2008) ။ synaptic အာနိသင်တိုးမြှင့်5ရက်အကြာတွင်ပေမယ့် 10 ရက်အကြာတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကတည်းကကိုကင်း - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်ယာယီဖြစ်ပါတယ် (Ungless et al ။ , 2001) ။ glutamatergic synapses ၏ VTA DA အာရုံခံသို့ကူးစက်ခြင်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြောင်းလဲမှုကိုတန်ပြန်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ ၀ င်ရမည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ကိုကင်း - သွေးဆောင် synaptic plasticity အဆိုပါ VTA အတွက် mGluR1 အဲဒီ receptors ၏ activation အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင် mGluR1 ၏အပြုသဘောဆောင်သော modulator ကို၏ intraperitoneal ထိုးဆေးသည်ကိုကင်း - သွေးဆောင် AMPAR subunit ပြန်လည်ခွဲဝေမှု (Bellone နှင့်Lüscher၊ 2006) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် VTA ၏အာရုံခံများရှိ mGluR1 လုပ်ဆောင်ချက်၏ဒေသပြတ်တောက်မှုသည် VTA တွင်ကိုကင်းမှဖြစ်ပေါ်စေသည့်အာနိသင်ကိုရှည်စေသည် (Mameli et al ။ , 2009) ။ ထို့ကြောင့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်၊ glutamatergic synaptic transmission ကို mGluR-dependant LTD မှပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs ကို GluA2 ပါ ၀ င်သော AMPARs နှင့်အတူနိမ့်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ပြုလုပ်သည် (Mameli et al ။ , 2007).
ယခုအချိန်အထိတိုးမြှင့် AMPAR ဂီယာအားဖြင့်သွေးဆောင် AMPAR / NMDAR အချိုးများအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် Vivo အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု။ သို့သော် GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်တွင် + 40 mV တွင် AMPAR / NMDAR အချိုးကိုလျော့ကျသွားစေနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် GluA2- ကင်းမဲ့သော AMPARs များသည် polyamine block ကြောင့်အပြုအမြှေးပါးအလားအလာများ၌ညံ့ဖျင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, AMPAR / NMDAR အချိုးတိုးမြှင့် NMDAR ရေစီးကြောင်းတစ်ခုကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်တိုးမြှင့် AMPAR / NMDAR အချိုးကိုလည်း NMDAR ဂီယာအတွက်လျော့နည်းမှုကြောင့်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Mameli et al ။ , 2011) ။ ဤသည်ကျဆင်းမှုတစ် NMDAR subunit ဖွဲ့စည်းမှု switch ကိုမှရလဒ်များ။ ကိုကင်းနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် GluN2A နှင့် GluN2A အချိုး (Yuan et al ။ , 2013) ။ ထို့အပြင် Ca သည်အလွန်နည်းသော GluN3A ပါ ၀ င်သည့် NMDARs ။2+ permeability, ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် synapses သို့ဖြည့်စွက်ကြသည် (Yuan et al ။ , 2013) ။ အတူတကွတွေ့ရှိချက်များအရကိုကင်းသည် GluN1 / GluN2As နှင့် GluN3A / GluN1A ကိုအစားထိုးသည့် tri-heteromeric GluN2 / GluN1B / GluN2A ပါ ၀ င်သည့် NMDARs ၏ Synaptic သွင်းခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ကိုကင်း - ကူးစက် AMPAR ဂီယာပြောင်းလဲမှုနှင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှစ် ဦး စလုံး GluN2A ပါဝင်သော NMDARs ၏သွင်းအပေါ်မှီခိုဖြစ်ရှာတွေ့ AMPAR ဂီယာအပြောင်းအလဲများနှင့်ကင်း - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို GluN3A နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်သို့မဟုတ်တစ် adeno- ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးပြီးနောက် GluN3A ဆံပင်တိုသော RNA (Yuan et al ။ , 2013) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင် AMPAR subunit ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးသော mGluR1 activation သည် NMDAR subunit ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကိုလည်းပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့သည် (Yuan et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့် GluN3A ပါ ၀ င်သော AMPARs ၏ Synaptic သွင်းခြင်းသည်ကိုကင်း - သွေးဆောင်သောပလပ်စတစ်၏ဖော်ပြချက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
glutamatergic သွင်းအားစုများအပြင်, VTA DA အာရုံခံလည်းဒေသခံ interneurons ထံမှနှင့် NAc နှင့် ventral pallidum ထံမှစီမံကိန်းများကနေ GABAergic သွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိ (VP; Kalivas et al ။ , 1993; Steffensen et al ။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကား inhibitory synapses VTA DA အာရုံခံပေါ်သို့လည်းစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် synaptic plasticity ခံယူ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလသင်တန်းများနှင့်အတူသော်လည်း, မော်ဖင်းအကိုက်, ကိုကင်းနှင့်နီကိုတင်း GABAergic synapses ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို VTA DA အာရုံခံဆဲလ်များသို့ထိခိုက်စေကြောင်းပြသခဲ့သည် (Niehaus et al ။ , 2010) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, VTA အတွက် inhibitory interneurons မှ GABAergic သွင်းအားစုပြီးနောက်အလားအလာရှိပါသည် Vivo အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် DA အာရုံခံဆဲလ်များကိုတားဆီးနိုင်သည် (Tan et al ။ , 2010; Bocklisch et al ။ , 2013) ။ အတူတကွ VTA DA အာရုံခံများသို့ glutamatergic synapses တွင် AMPAR / NMDAR အချိုး၊ GABAergic synapses ၏ LTP ဆုံးရှုံးမှု VTA DA neuron များသို့ VTA DA neuron များပေါ်သို့ဆုံးရှုံးခြင်း၊ VTA DA အာရုံခံ။ နီကိုတင်း၏ဖြစ်ရပ်တွင် VTA DA အာရုံခံများသို့ GABAergic ထည့်သွင်းမှုကို GABAergic အာရုံခံဆဲလ်များပေါ်ရှိနီကိုတင်အက်စီတလင်းခန် receptors (nAChRs) ၏ desensitization ဖြင့်နောက်ထပ်လျော့နည်းသွားသည်။ (Mansvelder et al ။ , 2002) ။ nAChRs ၏ activation သည် GABAergic အာရုံခံဆဲလ်များကို depolarizes စေပြီးကတည်းကဒီ desensitization ကို GABAergic ဂီယာပြန့်ပွားစေတယ်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် endogenous cholinergic transmission ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားရသော GABAergic အာရုံခံများအနက်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ nAChR desensitization ကြောင့် GABAergic သွင်းအားစုများ၏စိတ်ဓာတ်ကျမှုဟာ VTA DA အာရုံခံဆဲလ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင့်စေပါတယ်။ GABA နှင့် DA အာရုံခံဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအကြားပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Tolu et al ။ , 2013).
VTA တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်သည့် Synaptic plasticity သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်မဖြစ်ပေါ်ပါ။ VTA DA အာရုံခံအားလုံးကိုတူညီစွာထိခိုက်သည်။ လတ်တလောတွေ့ရှိချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ်မှတ်ဒေသများသို့စီမံကိန်းနှင့်အတူ VTA DA အာရုံခံဆဲလ်များ၏ကွဲပြားသောလူအများစုကိုထိခိုက်သည် (Lammel et al ။ , 2013) ။ NAc shell သို့ projecting DA neuron များပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသောပြုပြင်ထားသော glutamatergic synapses ကိုကင်းတစ်မျိုးတည်းထိုးသွင်းခြင်းသည် mPFC သို့ projecting DA neuron များအပေါ် synapses မဟုတ်ပါ (Lammel et al ။ , 2011) ။ mPFC သို့ projecting လုပ်သော DA အာရုံခံများအပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော synapses များသည် aversive stimulus အားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်ရန်လိုသောလှုံ့ဆော်မှုများသည် VTA ရှိကွဲပြားခြားနားသော DA neuron subpopulations ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုဆိုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိခိုက်သော NAc အခွံသို့ထုတ်လွှတ်သည့် DA အာရုံခံများသည် laterodorsal tegmentum မှရရှိသောအချက်များကိုလက်ခံရရှိသည်။ DA အာရုံခံဆဲလ်များသည်ရန်လိုသောလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိသည့် mPFC သို့ဘေးထွက်လှုံ့ဆော်မှုများမှအကျိုးသက်ရောက်သည် (Lammel et al) ။ , 2012).
တခုတည်းသော Vivo အတွက် အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အနည်းဆုံး5ရက်အကြာတွင်ခန္ဓာကိုယ်မှဆေးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်တွင်ကြာမြင့်စွာရှိနေသေးသည့် synaptic ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤသည်စွဲလမ်းမှုတွင်တွေ့မြင်ရသောကြာရှည်တည်တံ့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရှင်းပြရန်သက်တမ်းတိုလွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ E ကိုထပ်ခါတလဲလဲကိုအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ရေး (ခုနစ်ခုဆေးထိုး) ပြီးနောက် ven, VTA DA အာရုံခံအတွက် AMPAR / NMDAR အချိုးအတွက်ကို - သွေးဆောင်တိုးယာယီသည်နှင့်မရှိတော့အားဖြင့်အုပ်ချုပ်မှု၏ရပ်စဲပြီးနောက်ဆယ်ရက်အကြာတွင်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နည်းတူအားဖြင့်သွေးဆောင် synaptic အာနိသင် တစ်ခုတည်းဆေးထိုး (Borgland et al ။ , 2004) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုအားလုံးတွင်အဆက်မပြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမိမိဘာသာအုပ်ချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဆက်မပြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထက်ကြာရှည်ခံသည်။3လကြာကိုကာကိုလာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထံမှရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက်, ကိုကင်း - သွေးဆောင် Synaptic အာနိသင်ကြွက်များတွင် VTA DA အာရုံခံဆဲနေဆဲဖြစ်သည် (Chen က et al ။ , 2008) ။ မူးယစ်ဆေး Self- အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် VTA အာရုံခံအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic အာနိသင်၏ဤဇွဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုစွဲအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမောင်းနှင်အခြေခံအချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါ VTA အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic plasticity အားဖြင့်သွေးဆောင်ဖြစ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုဘာတွေလဲ? DA neurons များတွင်ရွေးချယ်ထားသော GluA1 subunit သို့မဟုတ် GluN1 subunit ၏မျိုးရိုးဗီဇဖျက်မှုနှင့်အတူကြွက်များတွင် VTA DA အာရုံခံများ၌မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပလပ်စတစ်ချို့တဲ့မှုရှိသော်လည်းကိုကင်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်နေရာပုံမှန် ဦး စားပေး (CPP) နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအာရုံခံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ဤကြွက်များတွင် (Engblom et al ။ , 2008) ။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် DA neuron များ၌ GluN1 subunit မရှိသောကြွက်များသည်လည်းပုံမှန်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုကိုပြသသော်လည်း CPP သည်ထိုကြွက်များတွင်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည် (Zweifel et al ။ , 2008), Engblom et al ကနေရလဒ်တွေနဲ့မတူဘဲ။ (2008) ။ လေ့လာမှုများအကြားကွာဟချက်မှာ CPP protocols များကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်, VTA DA အာရုံခံအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှု၏ရေတိုရေရှည်အပြုအမူသက်ရောက်မှု mediates ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအလွန်ကန့်သတ်သည်။ သို့သော် VTA DA အာရုံခံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသွေးဆောင်ထားသည့်ပလပ်စတစ်များသည်နှောင်းပိုင်းတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက်အရေးကြီးသောပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ DA အာရုံခံဆဲလ်များတွင် GluN1 မရှိသောကြွက်များတွင် CPP ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် (Engblom et al ။ , 2008) ။ ထို့အပြင်တာရှည်ကိုကင်းထုတ်ယူမှု GluN1 နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပါပြီးနောက်အမူအကျင့် sensitization ၏နှောင့်နှေးတိုးမြှင့် (Zweifel et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားအဆင့်နှောင်းပိုင်းအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ကောင်း VTA အတွက် synaptic ပလပ်စတစ်၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်များမဟုတ်ပေမယ့်ပိုပြီးဖွယ်ရှိ VTA အတွက် synaptic ပလပ်စတစ်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းအခြား ဦး နှောက်ဒေသများရှိ synaptic အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ VTA တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်သည့် Synaptic plasticity သည်အခြား ဦး နှောက်inရိယာများတွင် synaptic plasticity သို့ ဦး တည်သည်။ ၎င်းသည် VTA ကိုယ်နှိုက်ရှိ synaptic plasticity ထက်စွဲလမ်းမှု၌တွေ့ရသောအမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ VTA တွင်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသောပလပ်စတစ်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲပေးပြီး mesocorticolimbic circuitry တစ်လျှောက်ရှိအနိမ့်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည် (Creed and Lüscher, 2013) ။ T ကအောက်ပိုင်း ဦး နှောက်ဒေသများအထူးသဖြင့် NAc နှင့် PFC တွင်ပြောင်းလဲမှုများသည်စွဲလမ်းမှု၌ကြာရှည်တည်တံ့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံမှန်မဟုတ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
လှုပ်ရှားမှု - မှီခို plasticity များအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ VTA အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်များ၏စွမ်းရည် AMPAR နှင့် NMDAR subunits ၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအပေါ်မှီခို (Yuan et al ။ , 2013) ။ ပုံမှန်အားဖြင့် LTP သည် NMDAR-dependant ဖြစ်ပြီး presynaptic အချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်မှုသည် postsynaptic အမြှေးပါး၏ depolarization နှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အခါသွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။2+-NMDAR ၏ -block ကို Ca ခွင့်ပြု, depolarized အမြှေးပါးအလားအလာမှာစိတ်သက်သာရာရသည်2+ ဝင်ပေါက်။ သို့သော်ကိုကင်းသည် Ca အလွန်နိမ့်သည့် NMDARs ကို ဖန်တီး၍ NMDAR subunit ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲစေသည်။2+ permeability (ယွမ် et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်, NMDARs ၏ activation မရှိတော့ LTP သွေးဆောင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကိုကင်းသည် Ca ဖြစ်သော GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs ၏ Synaptic သွင်းခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။2+- ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်, LTP ပုံစံတစ်ခု AMPARs မှတဆင့်ကယ်လစီယမ်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့် NMDARs ၏လွတ်လပ်သောသော VTA အာရုံခံအတွက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ် (Mameli et al ။ , 2011) ။ သို့သော် GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs များသည်အမြှေးပါးအလွှာ၏အလားအလာရှိ polyamine block ကြောင့်အပြုသဘောအမြှေးပါးအလားအလာများ၌ညံ့ဖျင်းသည်။ Hyperpolarization ပိုများလေ GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs များသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာကယ်လ်စီယမ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ LTP ၏သော induction ယခု depolarization အစား postsynaptic ဆဲလ်၏ hyperpolarization နှင့်အတူ presynaptic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွဲဖက်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကထို့ကြောင့်, ကိုကင်း, လှုပ်ရှားမှု - မှီခို synaptic အာနိသင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ် (Mameli et al ။ , 2011) ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးဤအချက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း VTA ရှိ glutamatergic synaptic plasticity သည် mesocorticolimbic system ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် synaptic plasticity ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Synaptic အပြောင်းအလဲများသည် mesocorticolimbic system ၏အခြားဒေသများရှိ synaptic plasticity မတိုင်မီ VTA တွင်ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့အပြင် VTA ပြောင်းလဲမှုသည်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ပလပ်စတစ်သည်များသောအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုများစွာလိုအပ်သည် (Kourrich et al ။ , 2007ဒါကြောင့် Mato et al သတိပြုပါရန်လိုအပ်ပါသည်ပေမယ့်။ (2004) ကြွက်တွေမှာတစ်ခုတည်းပြသခဲ့သည် Vivo အတွက် THC ၏အုပ်ချုပ်မှုသည် NAc တွင် Synaptic plasticity ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် (Mato et al ။ , 2004). ထို့အပြင် NAC ရှိကိုကင်းမှထုတ်လုပ်သော synaptic plasticity သည် VTA ရှိ synaptic plasticity သည်သာလျှင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ (Mameli et al ။ , 2009) ။ mGluR1 ၏အပြုသဘော modulator ကို၏ intraperitoneal ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် VTA အတွက် Synaptic ပလပ်စတစ်ကိုပြန်ပြောင်းအဆိုပါ NAc အတွက် synaptic ပလပ်စတစ်တားဆီး (Mameli et al ။ , 2009) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, VTA အတွက်မူးယစ်ဆေး - evoked အာနိသင်ကြာရှည်သော VTA အာရုံခံအတွက် mGluR1 function ကို၏ဒေသခံနှောင့်အယှက်ပြီးနောက်, ပုံမှန်အားဖြင့်အမှုမဟုတ်သော NAc အတွက် synaptic ပလပ်စတစ်သွေးဆောင်ဖို့ကိုကင်း၏တစ်ခုတည်းဆေးထိုး, လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရ VTA နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်မှုနည်းသောပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး VTA သည်ပလပ်စတစ်၏ပထမ ဦး ဆုံးဌာနဖြစ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည် mesocorticolimbic စနစ်၏မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် glutamatergic synaptic plasticity ဖြစ်သည်။ ဤနောက်ပိုင်းအဆင့်အဆင့်ရှိပလပ်စတစ်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်သောယန္တရားများကိုနောက်အခန်းတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။
နျူကလိယအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ် accumbens
အဆိုပါ NAc ၏အဓိကအာရုံခံ, GABAergic အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs), PFC နှင့် amygdala အပါအဝင် cortical နှင့် limbic ဦး နှောက်ဒေသများမှ glutamatergic သွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိ (Groenewegen et al ။ , 1999). လေ့လာမှုများစွာမှရလဒ်များအရ NAc တွင် glutamatergic transmission သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။။ NAPA သို့ AMPA ၏ microinjection သည်ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုသိသာစွာပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး AMPAR မှ NAc သို့ရန်ပြုသည့် microinjection ကိုကင်းအားပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းကိုတားဆီးခဲ့သည် (Cornish နှင့် Kalivas၊ 2000; Ping et al ။ , 2008). ထို့အပြင် NAc အတွင်းလှုပ်ရှားမှုအပြုအမူ sensitization ဖျန်ဖြေဖို့ထင်နေသည်။ (Koya et al ။ , 2009, 2012). အဆိုပါ NAc အတွက် glutamatergic အချက်ပြစွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays ကတည်းက, NAc MSNs ပေါ်သို့ glutamatergic synapses မှာ synaptic ပလပ်စတစ်စွဲပါဝင်ပတ်သက်ဖွယ်ရှိသည်။
VTA နှင့်မတူဘဲကိုကင်းဆေးတစ်ခုတည်းသည် NAc တွင် Synaptic plasticity ဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ (Kourrich et al ။ , 2007). ကိုကင်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်မှသာလျှင်နာဆာ MSNs ရှိ glutamatergic synapses တွင် synaptic ခွန်အားပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။။ ဒီ Synaptic plasticity ၏ညှနျကွားမူးယစ်ဆေးဝါးများရုပ်သိမ်းရေး၏ကြာချိန်အပေါ်မူတည်သည် (Kourrich et al ။ , 2007) ။ Kourrich et al ။ (2007) အထီးကြွက်မှငါးတစ်ချိန်ကနေ့စဉ်ကိုကင်းထိုးအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 24 ဇနှင့် 10-14 နှစ် ဦး စလုံး NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက် AMPAR / NMDAR အချိုးအကဲဖြတ်။ စောစောစီးစီးဆုတ်ခွာစဉ် 24 ဇနောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် AMPAR / NMDAR အချိုးများသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုကင်းဆေးကြွက်များ၏ NAc shell neuron များ၌တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် 10-14 ရက်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်ကာလပြီးနောက် AMPAR / NMDAR အချိုးသည် NAc shell neuron များတွင်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုတည်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးကိုပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းကနောက်နေ့ AMPAR / NMDAR အချိုး 1 အချိုးကိုလျော့နည်းစေသဖြင့်ရုတ်တရက် synaptic potentiation ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်ကာလပြီးနောက်နောက်ထပ်ကိုကင်းထိတွေ့မှုအပြီး Synaptic စိတ်ကျရောဂါကိုလည်းတွေ့ရသည် (Thomas et al ။ , 2001; Brebner et al ။ , 2005) ။ သောမတ်စ် et al ။ (2001) ထို့အပြင် AMPAR / NMDAR အချိုးအတွက်ကျဆင်းခြင်း AMPAR ဂီယာအတွက်လျှော့ချရေးကိုထင်ဟပ်ပြသခဲ့သည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက်တိုးမြှင့် AMPAR / NMDAR အချိုးများ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်, Kourrich et al ။ (2007) AMPAR-mediated mEPSCs မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ AMPAR-mediated-mEPSCs ၏လွှဲခွင်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုကင်းကုသသည့်ကြွက်များတွင်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည် (Kourrich et al ။ , 2007အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် AMPAR-mediated synaptic ဂီယာ၏တစ် ဦး အလားအလာအကြံပြုခြင်း။ ဤရလဒ်သည် Boudreau နှင့် Wolf (Boudreau နှင့် Wolf တို့၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်) 2005ကြွက်များ၏ NAc အတွက် 21 ရက်ပေါင်းဆုတ်ခွာပြီးနောက် AMPAR subunits ၏တိုးလာဆဲလ်မျက်နှာပြင်စကားရပ်တွေ့ရှိခဲ့သူ။ ) ။ ကြာရှည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc shell ကို၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် synaptic အာနိသင်အခြေခံယန္တရားများအတိအကျမသိပေမယ့်, က synaptic အလားအလာ ERK phosphorylation ၏လမ်းဖြင့် extracellular signal ကို - စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase (ERK) လမ်းကြောင်း၏ activation အပေါ်မှီခိုကြောင်းလူသိများသည် (Pascoli et al ။ , 2012) ။ AMPAR mEPSCs ၏ကြိမ်နှုန်းတိုးလာမှုနှင့်တွဲစပ် - သွေးခုန်နှုန်းအချိုး (presynaptic function ကိုတိုင်းတာမှု) မပြောင်းလဲကြောင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူပေါင်းစပ် ကိုကင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည် NAc MSNs တွင် synapses အသစ်များဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ ကိုကင်း၊ အမ်ဖီတမင်းနှင့်နီကိုတင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက် NAc MSNs တွင် dendritic spines အရေအတွက်တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိချက်ကဤအချက်ကိုထောက်ခံသည်။ 2004) ။ ထို့ကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းထိတွေ့မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထုတ်ယူစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့် NAc shell တွင် synaptic potentiation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ synapses အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြန်လည်ထိတွေ့မှုတစ်ခုအပေါ်တွင်ရုတ်တရက် synaptic စိတ်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ကြာရှည်ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်နှင့်ဆေးတစ်မျိုးတည်းကိုပြန်လည်ထိတွေ့ပြီးနောက်နှစ် ဦး စလုံး NMDAR ကူးစက်မှုကိုမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါ (Kourrich et al ။ , 2007) ။ AMPAR-mediated EPSCs ၏ပြင်ဆင်ခြင်းညွှန်းကိန်းကိုကင်းဆေးကြွက်များတွင်ကြာရှည်စွာထုတ်ယူပြီးနောက်နှင့်နောက်ထပ်ကိုကာကိုလာထိတွေ့မှုအပြီးတွင်ထို့အပြင် synapse ၌ GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARs ကို GluAXNUMX ကင်းမဲ့သော AMPARs ၏ပြောင်းလဲမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများမတွေ့ရပါ။
ဤလေ့လာမှုများ synaptic ပလပ်စတစ်ထုတ်ယူရန်အဆက်မပြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပြီးတွင်ကိုကင်းမှအစောပိုင်းပြန်လည်ထွက်ခွာစဉ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောထုတ်လွှင့်မှု၏ Synaptic စိတ်ကျရောဂါကို NAc shell တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Schramm-Sapyta et al ။ , 2006အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်တိုးမြှင့် AMPAR ဂီယာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရသော), (Conrad et al ။ , 2008) ။ သို့သော် Kourrich et al ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူသည်။ (2007), ဒီတိုးမှုကြောင့် GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs ၏ Synaptic သွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ B က1 ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်း NAc တွင် surface မျက်နှာပြင်နှင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိ GluA45 အဆင့်များသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နှင့် AMPAR-mediated EPSCs ၏အတွင်းပြင်ပေးမှုသိသိသာသာကိုကင်းကြွက်များ၏ NAc core ကိုအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် (Conrad et al ။ , 2008) ။ GluA2 အဆင့်များကိုမပြောင်းလဲပါ။ GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPAR များကိုရှိပြီးသား GluA2 ပါ ၀ င်သော AMPARs ၏ထိပ်တွင်ထည့်သည်။ Kradrich et al ။ ကတည်းက Conrad et al သော်လည်း, 10-14 ရက်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် synaptic အပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်။ 42-47 ရက်များဆုတ်ခွာပြီးနောက် Synaptic အပြောင်းအလဲများကို check လုပ်ထား, က NAc အတွက် GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs ၏ Synaptic သွင်းဆုတ်ခွာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကာလပြီးနောက်သာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည်သည် NAc GluA1 အဆင့်များကို 21 ရက်ပိုင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်အနည်းငယ်မျှသာတိုးလာသည်၊ တွေ့ရှိချက်အရ GluA1 အဆင့်များသည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်ဟုဖော်ပြသည် (Conrad et al ။ , 2008) ။ Mameli et al အားဖြင့်လေ့လာမှု။ (2009) သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs ကိုကိုကင်းထိတွေ့မှုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ကြာရှည်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် synapses ထဲသို့ထည့်သွင်းသည်။။ တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ချက်အညွှန်းကိန်းကို noncontingent ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကိုကင်း၏ Self- အုပ်ချုပ်ရေးနှစ် ဦး စလုံးအပြီး 35 ရက်ပေါင်းဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc MSNs ၌တွေ့ခဲ့သည် (Mameli et al ။ , 2009) ။ ထို့ကြောင့် NAc MSNs ၏ Synaptic AMPAR subunit level သည်ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်များစွာပြောင်းလဲနေသည်။
သောမတ်စ် et al ။ (2001) နှင့် Kourrich et al ။ (2007) AMPAR ဂီယာပြန့်ပွားမှုကြောင့် (ကင်းစတင့်မှထွက်ခွာစဉ်ကကင်းဆေးကြွက်များ၏ NAc shell neuron များတွင် AMPAR / NMDAR အချိုး) သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Thomas et al ။ , 2001). သို့သော် AMPAR / NMDAR အချိုးအစားလျော့နည်းခြင်းသည်လည်းအသံတိတ်သောဆိုင်းနပ်စ်များကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အသံတိတ် synapses များသည် NMDARs ပါ ၀ င်သည့် glutamatergic synapses များ၊saac et al ။ , 1995) ။ သောမတ်စ် et al ။ (2001) ကို NMDAR ဂီယာအတွက်ကိုကင်း - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုမတှေ့ခဲ့ပေမယ့်ဒီအသံတိတ် synapses ၏အရေအတွက်ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်မထားဘူး။ အမှန်မှာ၊ ထပ်ခါတလဲလဲပါဝင်မှုမရှိသောကိုကင်းထိတွေ့မှုအပြီးတွင် NAc shell MSNs တွင်အသံတိတ် synapses အရေအတွက်တိုးများလာခဲ့သည် (Huang et al ။ , 2009) ။ ဤတိတ်ဆိတ်သောအသစ်စက်စက်ကိုကိန်းဓာတ်ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းထုတ်လုပ်သည်၊ ကိုကင်းကုသမှု၏သုံးရက်မြောက်သော နေ့မှစ၍ တိတ်ဆိတ်သော synapses ရာခိုင်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ အသံတိတ် synapses ၏ကိုကာကိုလာ - သွေးဆောင်မျိုးဆက်အသစ် GluN2B ပါဝင်သော NMDARs ၏အမြှေးပါးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည် (Huang က et al ။ , 2009) ။ မျက်နှာပြင်နှင့် GluN2B ၏စုစုပေါင်းအဆင့်များသော်လည်း GluN2A သည်မဖြစ်မနေထည့်သွင်းထားသော GluN1 subunits များ၏မျက်နှာပြင်အဆင့်နှင့်ပေါင်းစပ်။ တိုးလာသည်။ ထို့အပြင် GluN2B ပါ ၀ င်သည့် NMDAR များကိုစိမ့် ၀ င်စွာတားဆီးပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်သော synapses တိုးပွားမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဆုတ်ခွာနေစဉ်တိတ်ဆိတ်စွာပြုမူသောအရေအတွက်များထပ်မံကျဆင်းသွားသည် (Huang et al ။ , 2009) ။ သို့သော်ဤသေချာပေါက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ synapses နောက်တဖန်ပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။။ ဆိုလိုသည်မှာအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်သောအသံတိတ် synapses များသည် (GluA2- ချို့တဲ့သော) AMPARs ၏ synaptic သွင်းခြင်းဖြင့် unsilenced ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုလိုနိုင် ဤသည် AMPAR subunits များ၏တိုးမြှင့်ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ထုတ်ဖော်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက်တိုးမြှင့် AMPAR / NMDAR အချိုးနောက်ကွယ်မှယန္တရားများ၏တ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် AMPAR / NMDAR အချိုးအစားတွင်တွေ့ရှိရသောအပြောင်းအလဲများနှင့်အသံတိတ် synapses အရေအတွက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည်အတူတကွလက်တွဲသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အသံတိတ် synapses ၏မျိုးဆက်နောက်ဆက်တွဲ Synaptic ပလပ်စတစ်လွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မည်။
အစောပိုင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း AMPAR / NMDAR အချိုးအစားလျော့နည်းသွားမှု၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုမရှင်းလင်းသေးပါ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic စိတ်ကျရောဂါ NAc shell ကိုအာရုံခံဆဲလ် anhedonia နှင့် dysphoria ၏ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်သဘာဝအကျိုးလှုံ့ဆော်မှုမှလျော့နည်းအထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအဆိုပြုထား (Van den Oever et al ။ , 2012) ။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးတဏှာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေး re- ထိတွေ့အောက်ပါ Synaptic စိတ်ကျရောဂါ၏အပြုအမူအကျိုးဆက်အပြုအမူ sensitization ၏စူးရှသောစကားရပ်ဖြစ်ထင်ရသည် (Brebner et al ။ , 2005) ။ GluA2 ၏ endocytosis disrupts တစ် ဦး အမြှေးပါး permeable peptide ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ပြုတ်ရည်အားဖြင့် Synaptic စိတ်ကျရောဂါ၏ induction ပိတ်ဆို့ amphetamine ပြန်လည်ထိတွေ့မှုကြောင့်သွေးဆောင်တိုးလာ locomotor လှုပ်ရှားမှုတားဆီး။
အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း AMPAR ကူးစက်မှု၏တဖြည်းဖြည်းတက်လာခြင်းသည်“ မူးယစ်ဆေးတည့်မတ်ခြင်းကိုတိုးပွားစေခြင်း” ကိုဖျန်ဖြေနိုင်သည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှနုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပထမလများတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးများလာသည်။ 2001) ။ AMPAR ထုတ်လွှင့်မှုအလားအလာသည် NAc MSNS ၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအပေါ်တုန့်ပြန်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် Cue- သွေးဆောင်ကိုကင်း - ရှာဖွေခြင်းသည် GluA2 - ချို့တဲ့သော AMPARs ကို NAc ထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လျော့နည်းသွားသည် (Conrad et al ။ , 2008) ။ ထို့အပွငျ amygdala-to-NAc synapses မှာ GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs ၏ internalization အားဖြင့် Vivo အတွက် ကြာရှည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက် optogenetic နှိုးဆော်တဏှာ၏ပေါက်ဖွားလျော့နည်းသွား (Lee et al ။ , 2013) ။ ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တိတ်ဆိတ်စွာပြုမူခြင်းကြောင့်ကိုကင်းတပ်မက်မှုတိုးများလာစေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုအကြံပြုခြင်းမရှိသည့်၊
NAc တွင်ဖော်ပြထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic ပြောင်းလဲမှုများသည် Bellone နှင့်Lüscherတို့အား ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။2012) နှင့် Dong နှင့် Nestler (2014) ကိုကင်းစွဲလမ်းစဉ်အတွင်းတွင် synaptic ဂီယာပြန်လည်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာအယူအဆကိုတင်ပြရန်၊ ပုံမှန် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော synapses အမျိုးအစားများကိုဖန်တီးရန် (Bellone နှင့်Lüscher, 2012; Dong နှင့် Nestler, 2014) ။ ဥပမာများအသံတိတ် synapses ၏မျိုးဆက်နှင့် GluA2 - ချို့တဲ့ AMPARs ၏ Synaptic သွင်းဖြစ်ကြသည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှုသည် mesocorticolimbic system တွင် synapses ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သော synapses များသည်ကြာရှည်တည်မြဲသည့်အတွေ့အကြုံ - မှီခိုသည့်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုခံယူရန်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤသည်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောကြာရှည်ခံသည့်ပလတ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြရန်စဉ်းစားထားခြင်းကြောင့်ခိုင်မာပြီးကြာရှည်ခံသည့်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ (Dong and Nestler, 2014) ။ အဆိုပါပြန်လည်နုပျိုခြင်းအယူအဆလည်းထိုကဲ့သို့သော GluN3A ပါဝင် NMDARs ၏ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ရေးအဖြစ် VTA အတွက် synaptic အပြောင်းအလဲများကိုမှတိုးချဲ့။ ငယ်ရွယ်သော synapses တွင်အတွေ့အကြုံ - မှီခိုသောပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုခံယူရန်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များသည်အဘယ်ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြနိုင်သည်။
Glutamatergic synaptic plasticity သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းကာလအတွင်းသာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုမှ cue- သွေးဆောင်ပြန်လည်ရောက်ရှိစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုကင်း၏မရှိခြင်းအတွက်ကိုကင်း - ဆက်စပ်တွေကို၏တင်ပြချက် dendritic ကျောရိုးအရွယ်အစားနှင့်ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှု၏သမိုင်းရှိခဲ့ကြွက်များ၏ NAc core ကိုအတွက် AMPAR / NMDAR အချိုးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးထုတ်ယူတွေ့ရှိခဲ့သည် (Gipson et al ။ ။ , 2013a) ။ ဤရွေ့ကားတိုးပြီးသားကိုကင်း - ဆက်စပ် cue ၏တင်ပြချက်နှင့် AMPAR / NMDAR အချိုးအစားနှင့် 15 မိမှာကျောရိုး ဦး ခေါင်းအချင်း၏အပြုသဘောမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ပြီးနောက် min ပြီးသားပစ္စုပ္ပန် 15 ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် NAc core MSNs ၌ cue-induced synaptic potentiation သည် relapse ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ cue- သွေးဆောင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းစတင်ပြီးနောက်နှစ်နာရီ, dendritic ကျောရိုးအရွယ်အစားနှင့် AMPAR / NMDAR အချိုး pre- relapse အဆင့်ဆင့်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ GABAR ၏ agonists များကို PL သို့ microinjection လုပ်ခြင်းသည် cue-induced synaptic ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုလုံးကိုတားဆီးသောကြောင့် prelimbic cortex (PL) တွင် medial PFC (mPFC) ၏ဒေသခွဲသည်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း (Gipson et al ။ , 2013a) ။ glutamatergic PL-to-NAc synapses ၏ cue-induced လုပ်ဆောင်မှုသည်အမှန်တကယ် relapse ဖြစ်စေရန်လုံလောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုက glutamatergic mPFC-to-NAc synapses နှင့် relapse ၏ကိုကင်း - သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်အကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ချိတ်ဆက်မှုအဘို့အစောဒကတက်သည် (Pascoli et al ။ , 2014).
glutamatergic PL-to-NAc synapses မှာ cue- သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု၏သက်ရောက်မှုကိုစွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် NAc ရှိ Basal extracellular အချိုမှုအဆင့်လျှော့ချခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည် (Gipson et al ။ , 2014) ။ အဆိုပါ glial cystine-glutamate exchanger သည် glutamate အား extracellular space သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော glial cystine-glutamate exchanger ၏ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဆက်ပြောသည်နှင့်အဆိပ်အတောက်ကင်းကင်းနှင့်နီကိုတင်းထိတွေ့ပြီးနောက် NAc တွင်ရှိသော Basal extracellular glutamate အဆင့်များကိုလျှော့ချပေးသည် (Kalivas, 2009) ။ ရလဒ်အနေဖြင့် presynaptic inhibitory mGluR2 နှင့် mGluR3 receptors များအပေါ်ရှိ glutamate အသံကိုလျော့နည်းစေသည်။ Gipson et al ။ , 2014) ။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ရောဂါများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်အချိုမှုန့်အမြောက်အမြားထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော glutamate သည် synapse မှထိရောက်စွာမဖယ်ထုတ်နိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် glutamate စားသုံးမှုကိုဖြန်ဖြေပေးသော glial glutamate transporter 1 (GLT-1) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်လျော့နည်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည် (Knackstedt et al ။ , 2010; Shen et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များသည် NAc glutamatergic synapses တွင် glutamate အလွန်အကျွံပမာဏမြင့်တက်စေသည်၊ ၎င်းအချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှပြင်းထန်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းရှင်းပြနိုင်သည်။
NAc တွင် synaptic ခွန်အားကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအပြင်အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် NAc synapses ၏စွမ်းရည်ကိုနောက်ဆက်တွဲ synaptic plasticity အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်စဉ်းစားသည်။ ကိုကင်းစွဲခြင်းသည် NAc ၏အဓိကအမြစ်များရှိ glutamatergic synapses တွင် NMDAR-မှီခိုသော LTP နှင့် LTD ၏ချို့ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Martin et al ။ , 2006; Moussawi et al ။ , 2009; Kasanetz et al ။ , 2010) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုကင်းကင်းကြွက်များအား 21 ရက်ရက်စက်စက်ရှောင်ပြီးနောက် LTD သည်, NAc core တွင်, ဒါပေမယ့် NAc shell ကိုအတွက်ချို့ယွင်းခဲ့သည် (Martin et al ။ , 2006) ။ Synaptic plasticity တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချို့ယွင်းမှုများသည်ဆေးစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများဖြစ်သောလူတို့၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများရှိသော်ငြားလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရှင်းပြနိုင်သည့်၊ ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်။ ချို့ယွင်း NMDAR- မှီခို, LTD ၏ဆက်စပ်မှုကိုစွဲကဲ့သို့သောအပြုအမူတီထွင်သောကိုကင်း Self- စီမံခန့်ခွဲကြွက်သာ, LTD ကိုထိန်းချုပ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိန်းသိမ်းထားသောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေစဉ်တွေ့ရှိချက်အားဖြင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည် (Kasanetz et al ။ , 2010) ။ အလားတူရလဒ်များကိုအီသနော၏ Self- အုပ်ချုပ်ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီအမူအကျင့်လိုက်လျောညီထွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းအီသနော - ထိခိုက်ကြွက်များတွင်ပေမယ့်မ NMDAR- မှီခို, LTD သိသိသာသာချို့ယွင်းခဲ့သည် (Abrahao et al ။ , 2013) ။ D-serine, အ NMDAR ၏တွဲဖက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ, NMDAR- မှီခို synaptic plasticity အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအတွက်အခန်းကဏ္ role မှပါလိမ့်မယ် (D'Ascenzo et al ။ , 2014) ။ D-serine သည် NMDAR မှီခိုသော LTP နှင့် LTD အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ NAc ၏အဓိကနှင့် D-serine အဆင့်များသည်ကိုကင်းကုသသည့်ကြွက်များ၏ NAc ၏အမာခံတွင်လျော့နည်းသွားသည် (Curcio et al ။ , 2013) ။ ကိုကင်းကုသသည့်ကြွက်များမှအချပ်များတွင် D-serine နှင့်ပေါင်းစပ်စွာ LTP နှင့် LTD ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် NAc အတွက် NMDAR- မှီခို Synaptic plasticity အတွက်ကို - သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုလျှော့ချ D-serine အဆင့်ဆင့်ကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
VTA ၌ရှိသကဲ့သို့ဆေးဝါးများသည် NAc တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Synaptic အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေရုံသာမက MSNs ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟူသောအထောက်အထားအချို့ရှိသည်။ (Wolf and Ferrario, 2010; Creed နှင့်Lüscher, 2013) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးသော NAc အခွံအတွင်း Synaptic အာနိသင်တိုးမြှင့် D1-receptor- ဖော်ပြ MSNs ပေါ်သို့ synapses များ၌၎င်း, D2-receptor- ဖော်ပြ MSNs ပေါ်သို့ synapses မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့ထင်နေသည် (Pascoli et al ။ , 2012) ။ မကြာသေးမီက D1-receptor-expressing MSNs ပေါ်သို့ synapses ၌ဤ synaptic potentiation သည် D1R / GluN1 ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းခြင်း (Cahill et al ။ , 2014) ။ D1R / GluN1 အသင်းအဖွဲ့များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်း D1R နှင့် NMDAR- မှီခိုသောအချက်ပြမှုများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် synaptic potentiation အတွက်လိုအပ်သော ERK ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် Synaptic plasticity
VTA မှထွက်ရှိသော DA စီမံချက်၏အဓိကအဓိကရည်မှန်းချက်မှာ medial prefrontal cortex (mPFC) ဖြစ်သည်။ mPFC ၏ပိရမစ်အာရုံခံဆဲလ်များသည် amygdala (BLA) ၏ basolateral နျူကလိယအပါအ ၀ င် ဦး နှောက်areasရိယာများစွာမှ glutamatergic projections ကိုလက်ခံရရှိပြီး glutamatergic projections ကို VTA, NAc နှင့် BLA (Gabbott et al) သို့ပြန်ပို့သည်။ 2005; ဟူးဗားနှင့် Vertes, 2007; ဗန်တွင်း Oever et al ။ , 2010) ။ စွဲစွဲလမ်းမှုလျော့နည်းသွား Basal PFC အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ် "hypofrontality" နှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Volkow et al ။ , 2003ထပ်တလဲလဲကိုကင်းကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည် (Sun and Rebec, 2006) ။ mPFC ကို dorsal (PL အပါအ ၀ င်) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောခန္ဓာဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်သောလက္ခဏာများ (infralimbic cortex အပါအဝင်) ventral အပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည် (Van den Oever et al ။ , 2012) ။ dorsal mPFC သည်ခန္ဓာဗေဒအရအဓိကအားဖြင့် NAc core ကိုစိမ့်ဝင်စေသည်ဟုယူဆရပြီး ventral mPFC သည် NAc shell သို့ projections ကိုပေးပို့သည် (Heidbreder နှင့် Groenewegen, 2003) ။ dorsal နှင့် ventral mPFC တို့သည်လည်းစွဲလမ်းမှုတွင်ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေသည်ဟုယူဆရသည်။ dorsal mPFC ၏လှုပ်ရှားမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကို cue-induced ပြန်လုပ်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည် (Gipson et al ။ , 2013b) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ventral mPFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေနေတုံ့ပြန်မှုကိုနှိမ်နင်းနိုင် (Peters et al ။ , 2008; LaLumiere et al ။ , 2012) ။ တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် mPFC သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ to မှပါ ၀ င်သည်ဟုယူဆကြသည်။
mPFC တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနည်းသောပလတ်စတစ်ကိုစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် mPFC တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic plasticity ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ အကန့်အသတ်သာရှိသည်။ စသည်တို့အတွက် လေ့လာမှုများအရနီကိုတင်းသည် glutamatergic synapses များ၌ glutamatergic synapses များ၌ spike-time-dependenti potentiation ၏သော့ချက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။ Couey et al ။ , 2007) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊5သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သောအဆက်အသွယ်ကင်းကင်းထိတွေ့မှု (နေ့စဉ်ခုနစ်ကြိမ်ဆေးထိုးခြင်း) မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်း GABA သွင်းအားစု (Lu et al ။ ) ကြောင့်ကြွက် mPFC အလွှာ V ပိရမစ်ဓာတ်အာရုံခံများပေါ်သို့စိတ်တက်ကြွစေသည့် synapses များ၌လွယ်ကူစွာကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ 2010) ။ ဤသည် ဦး နှောက် - ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) - GABA ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်၏လျှော့ချရေးကသွေးဆောင်ခဲ့သည်A mPFC ရှိ receptors များ၊ GABAergic တားစီးမှုကိုနှိမ်နှင်းရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီတိုးမြှင့်ပလပ်စတစ်၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုသော်လည်း၊ mPFC တွင် LTP သော induction ၏ပံ့ပိုးမှုသည်ကိုကင်းထုတ်ယူပြီးနောက်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားစေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုသွယ်ဝိုက်သောအထောက်အထားအချို့ရှိသည်။ (Lu et al ။ , 2010).
နီကိုတင်းကိုပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် mPFC LTP လျှော့ချသော်လည်း၊ mPFC တွင် synaptic potentiation ကို induction သည်ကိုကင်းကဲ့သို့ပင်နီကိုတင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်လွယ်ကူစေသည်။ စဉ်အတွင်းနှင့်ချက်ချင်းအောက်ပါ။ Vivo အတွက် နီကိုတင်းကုသမှု၊ glutamatergic synaptic potentiation သည်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များ၏ mPFC တွင်လျော့နည်းသွားသည်။ ဤ LTP သည်အရွယ်ရောက်သောကြွက်များ၏ mPFC တွင်သိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည်၊ သူတို့ဆယ်ကျော်သက်အတွင်းနီကိုတင်းကုသမှုကိုခံယူပြီးနောက် (Goriounova နှင့် Mansvelder၊ 2012) ။ synaptic potentiation အပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာနီကိုတင်းထိတွေ့မှု၏ bidirectional သက်ရောက်မှုများအများဆုံးဖွယ်ရှိသည့် inhibitory metabotropic အချိုမှု receptor2(mGluR2) ၏ synaptic အဆင့်ဆင့်အတွက် bidirectional အပြောင်းအလဲများကကမကထပြုခဲ့နေကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်နီကိုတင်းထိတွေ့ပြီးနောက်၊ mPFC synaptic အမြှေးပါးရှိ mGluR2 ပရိုတင်းပမာဏသည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏ပထမနေ့တွင်တိုးလာသော်လည်းနီကိုတင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်5လျော့နည်းသွားသည် (Counotte et al ။ , 2011) ။ mGluR2 agonists ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နီကိုတင်း - သွေးဆောင်မှုတိုးမြှင့်မှုကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ mGluR2 ရန်ဘက်ပြုသူများက Synaptic Potentiation (Goriounova နှင့် Mansvelder၊ 2012).
ဤသည်ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌နီကိုတင်းထိတွေ့ပြီးနောက် mPFC တွင်α4နှင့်β2 subunits များပါ ၀ င်သည့် nAChRs ၏ဖော်ပြချက်သည်ယာယီတိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ LTP ပိတ်ပင်တားဆီးမှု (Counotte et al ။ , 2012) ။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာကြွက် mPFC တွင်α4နှင့်β2 subunits များပါ ၀ င်သည့် nAChRs ရဲ့အသုံးအနှုန်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာနီကိုတင်းထိတွေ့ပြီးနောက်မှသာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် (Counotte et al ။ , 2012) ။ အလားတူပင် Goriounova နှင့် Mansvelder တို့၏လေ့လာမှု (2012) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးဘဝကာလအတွင်းနီကိုတင်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများအကြားခြားနားချက်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လူကြီးဘဝတွင်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုသည် LTP ၌ကြာရှည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤအချက်နှင့်အညီ, ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းဓာတ်ထိတွေ့မှု, ဒါပေမယ့် postadolescent နီကိုတင်းထိတွေ့မှုမ, ကြွက်များတွင်ကုသပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်5impulsive အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်တိုး၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တိုး၏ ဦး ဆောင် (Counotte et al ။ , 2009, 2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုသည် synaptic mGluR2 အဆင့်များကိုကြာရှည်စွာလျှော့ချခြင်းနှင့်လူကြီးဘဝတွင်သိပ္ပံနည်းကျချို့တဲ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ကြွက် mPFC တွင်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ စုစုပေါင်းလေ့လာမှုများအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်နီကိုတင်း၏ကာလကြာရှည်သက်ရောက်မှုကို PFC အပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုအားနည်းသောကာလဖြစ်သည်။
ကြာရှည်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်, glutamate အဲဒီ receptor subunit ဖြန့်ဖြူးပြောင်းလဲမှုများအများအပြားလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် -2ရက်သတ္တပတ်များစွာမူးယစ်မှူးအားမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှသတင်းပို့သည် (m TFC) တွင် GluA3 / 4, GluA2 နှင့် GluN2B တို့၏ဖော်ပြချက်တိုးလာသည် (Tang et al ။ , 2004) ။ သို့သော် mPFC ရှိ glutamate receptor subunits များ၏ synaptic အမြှေးပါးဖော်ပြမှုအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည် (Van den Oever et al ။ , 2008) ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်အချိုမှုနင့်အနည်orရိယာခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုတွင်ပြောင်းလဲမှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတိုးချဲ့သုံးစွဲပြီးနောက်မှသာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကို Ben-Shahar et al ၏လေ့လာမှုကထောက်ခံသည်။ (2009),2ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် abstinence ကိုသောက်ပြီးနောက် GluN2B ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းကိုနေ့စဉ်တိုးချဲ့ခဲ့သောကြွက်များတွင်သာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း (Ben-Shahar et al ။ , 2009).
မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကို cue- သွေးဆောင်ပြန်လည်ရောက်ရှိအတွက် mPFC အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှထင်နေသည်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုမှ cue- သွေးဆောင် relapse ၏ယခုအချိန်တွင် mPFC တွင် synaptic ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဘိန်းဖြူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုမှရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက်ဘိန်းဖြူနှင့်ဆက်စပ်သည့်ကြွက်များ၏ mPFC တွင် synaptic စိတ်ကျရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် (Van den Oever et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ mPFC အတွက် AMPAR subunits GluA2 နှင့် GluA3 ၏ synaptic အမြှေးပါးစကားရပ်ကိုလျှော့ချခဲ့သည်နှင့် clathrin- မှီခို endocytosis တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သော clathrin-coat ကိုပရိသပရိုတိန်း AP2m1 ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး, တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဘိန်းဖြူ - ဆက်စပ်တွေကိုပြန်လည်ထိတွေ့ GluA2 / GluA3 AMPARs ၏ clathrin-mediated endocytosis သွေးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင် AMPAR / NMDAR အချိုးအစားလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းညွှန်းကိန်းတိုးမြှင့်မှုများကို mPFC pyramidal neuron များတွင်တွေ့ရှိရသည်။ GluA2 ပါ ၀ င်သော AMPARs ၏ endocytosis ဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုသည်။ ဤအအကဲဖြတ်မှာတော့ dorsal နှင့် ventral mPFC အကြား dissociations လုပ်မခံခဲ့ရပါ။ ထို့ကြောင့်, cue- သွေးဆောင် Synaptic စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုလုံးကို mPFC အတွက်သို့မဟုတ်ဒေသခွဲများ၏တ ဦး တည်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရှိမရှိမသိရသည်။ သို့သော် GluA2 ပါဝင်သော AMPARs ၏ cue- သွေးဆောင် endocytosis ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို mPFC ဒေသခွဲနှစ်ခုလုံးအတွက်သီးခြားစီအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ GluA2 endocytosis ကို ventral mPFC တွင်အထူးသဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ dorsal mPFC ရှိ GluA2 endocytosis ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုသော်လည်း (Van den Oever et al ။ , 2008) ။ ဤအချက်သည် GluA2-containg AMPARs နှင့်အမြန် endocytosis နှင့် ventral mPFC တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic စိတ်ကျရောဂါသည် cue- သွေးဆောင်မှုအားဘိန်းဖြူရှာဖွေခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဤသည် ventral mPFC မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းအပေါ်တားစီးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ctr သွေးကြောစိတ်ကျရောဂါသည် ventral mPFC တွင်စိတ်ကျဝေဒနာသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းအပေါ်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုအားနည်းစေပြီး၊
လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်။
ကြွက် mesocorticolimbic စနစ်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဇွဲအထောက်အကူပြုရန်။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအမှန်တကယ်လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ synaptic ပလပ်စတစ်သွေးဆောင်သလား လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအရလူသားများတွင်စွဲလမ်းမှုသည်တိရိစ္ဆာန်များ၏စွဲလမ်းမှုပုံစံများတွင် synaptic အပြောင်းအလဲများရှိသည့် ဦး နှောက်areasရိယာများ၌လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်ကြောင်းပြသခဲ့သည် (Van den Oever et al ။ , 2012) ။ ဤလေ့လာမှုများ synaptic ပလပ်စတစ်ကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါဘူးပေမယ့်, သူတို့ကစွဲလူသားမြားသအတွက် mesocorticolimbic စနစ်အတွက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မှုတည်မြဲစေကြောင်းပြသပါ။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာလူ့ ဦး နှောက်တွင် glutamatergic synapses ၏ပလပ်စတစ်မှုကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းခဲ့ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်မှုနည်းသောပလတ်စတစ်၏သက်သေသာဓကသည်နည်းပါးသည်။ စမ်းသပ်မှုအရ၊ motor-evoked အလားအလာများ (MEPs) ၏အချိန်ကိုက်မှီခိုအားထားနိုင်သောပလတ်စတစ်သည် Peripheral nerve stimulation (PNS, presynaptic stimulation နှင့်ဆင်တူသည်) ကို cortex (Stefan et al) နှင့် transcranial magnetic stimulation (TMS) နှင့်အတူလူသားဘာသာရပ်များတွင်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ , 2000, 2002; Wolters et al ။ , 2003; De Beaumont et al ။ , 2012; lu et al ။ , 2012) ။ ထိုကဲ့သို့သောတွဲဆက်နွယ်မှုဆွ (PAS) သည်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အချိန်ကာလပေါ် မူတည်၍ LTP ကဲ့သို့တိုးမြှင့်မှုနှင့် MEP လွှဲခွင်တွင် LTD ကဲ့သို့လျှော့ချမှုနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သည် (Wolters et al ။ , 2003, 2005; Thabit et al ။ , 2010; De Beaumont et al ။ , 2012; lu et al ။ , 2012; Conde et al ။ , 2013; Koch et al ။ , 2013) ။ Synaptic အဆင့်တွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားသောလူ့ ဦး နှောက်တစ်သျှူးတွင် cortical glutamatergic synapses များသည်လူကြီးဘဝတစ်လျှောက် LTP နှင့် LTD နှစ်ခုလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းသည်လူ့ဘာသာရပ်များရှိ PAS တွင်အသုံးပြုသောအချိန်နှင့်တူညီသောအချိန်ကိုက်စနစ်များကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ 2010, 2014; Verhoog et al ။ , 2013) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ့ synapses ၏ဤပလပ်စတစ်သည် postsynaptic NMDARs နှင့် L-type voltage-gated calcium လိုင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Grundey et al ။ (2012) PAS ကိုလူသားများဘာသာရပ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနီကိုတင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အချိန်တွင် PAS မှထုတ်ပေးသော LTP ကဲ့သို့ synaptic plasticity သည်ဆေးလိပ်သောက်သူများကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သော်လည်းနီကိုတင်း patch ၏အုပ်ချုပ်မှုမှကယ်တင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Grundey et al ။ , 2012) ။ ဤသည်မူးယစ်ဆေး - သွေးဆောင် Synaptic plasticity ၏ယန္တရားများလည်းလူ့ ဦး နှောက်အတွက်အခန်းကဏ္aဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုထားသည်။ ရှင်းနေသည်မှာကြွက်များတွင်တွေ့ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်လူ့ ဦး နှောက်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္aမှပါ ၀ င်သည်ကိုလူသားဘာသာရပ်များနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာသက်ရှိလူသား ဦး နှောက်တစ်သျှူးများပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောအောင်မြင်မှုများသည်လူ့စွဲလမ်းသူများအားစမ်းသပ်မှုများတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကြွက်မှေးမှူသုတေသနမှလှုံ့ဆော်သည့်ကုသမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုနှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များသည်ဆေးကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမှန်တကယ်သက်ဆိုင်သည်ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများပလတ်စတစ်သည်လူ့စွဲလမ်းမှုအတွက်ကုသမှုအတွက်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ပလတ်စတစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အလားအလာရှိသောရည်မှန်းချက်များကိုပေးနိုင်ကြောင်းကြွက်စွဲသုတေသနကို အခြေခံ၍ စိတ်ကူးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်။ အဆိုပါ VTA အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ် mesocorticolimbic စနစ်တစ်လျှောက်လုံး synaptic အပြောင်းအလဲများကို၏အဆငျ့ဆငျ့အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်, VTA ၏အဆင့်မှာအစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုထိုကဲ့သို့သော NAc ကဲ့သို့မြစ်အောက်ပိုင်း ဦး နှောက်ဒေသများတွင် synaptic အပြောင်းအလဲများကိုတားဆီးလိမ့်မယ်။ ကြွက်များတွင်, VTA အတွက်ကိုကင်း - Synaptic ပလပ်စတစ် mGluR1 receptors (Bellone နှင့်Lüscher, activation) ကပြောင်းပြန်နိုင်ပါတယ် 2006) ။ mGluR1 receptors ကိုလှုံ့ဆော်သည် mGluR-dependant LTD ပုံစံကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင် GluA2- ချို့တဲ့သော AMPARS ကို GluA2 ပါ ၀ င်သော AMPARs နှင့်နိမ့်သော conduance ဖြင့်အစားထိုးခြင်း (Mameli et al ။ ,) ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ 2007) ။ ဤသည် Synaptic ဂီယာပုံမှန်။ ထို့အပွငျဤ mGluR-မှီခို LTD မှဤအမျိုးအစားကိုလည်း NMDARs ၏ကိုကင်း - သွေးဆောင်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကိုပြောင်းပြန် (Yuan et al ။ , 2013) ။ ရွေးချယ်ထားသည့် VTA တွင် synaptic plasticity ကိုကာကွယ်ခြင်းသည် NAc တွင်နောက်ဆက်တွဲ synaptic plasticity ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကြွက်များတွင်ကြာရှည်စွာဆုတ်ခွာခြင်းကိုရှာဖွေပြီးနောက် cue-induced cocaine ကိုရှာဖွေရန်အတွက်လုံလောက်သည် (Mameli et al ။ , 2009), ဒီမဟာဗျူဟာကြွက် ဦး နှောက်အတွက်ကိုကင်းစွဲ၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုအကြံပြု။ NAc တွင်၊ mGluR1 အပြုသဘောပြောင်းလဲခြင်းသည်ကြာရှည်ဆေးဖြတ်ခြင်းအပြီးမြင်တွေ့ရသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic plasticity ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ (Wolf and Tseng, 2012) ။ ထို့ကြောင့် mGluR1 များသည်စွဲလမ်းမှုအစောပိုင်းအဆင့်များကိုကုသရန်အလားအလာရှိသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ရုံသာမကရောဂါ၏နောက်ပိုင်းအဆင့်များ၌လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှု၏နွေးထွေးမှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ mGluR1 ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိ၊ ဒါ့အပြင် mGluR1 activation ကိုကင်းထက်အခြားအလွဲသုံးစားမှု၏အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကသွေးဆောင် synaptic ပလပ်စတစ်အောက်ပါ VTA အတွက် Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုပုံမှန်ရှိမရှိမသိရပါဘူး။
နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောအလားအလာရှိသောပစ်မှတ်မှာအက်စစ် - အာရုံခံအိုင်းယွန်းရုပ်သံလိုင်း 1A (ASIC1A)၊ ၎င်းသည် NAc တွင်ကိုကင်းမှထုတ်လုပ်သော synaptic ပလပ်စတစ်ကိုတားဆီးပေးသော (Kreple et al ။ , 2014) ။ ASIC1A ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ ကြွက် NAc တွင် ASIC1A အလွန်အကျွံထုတ်ယူခြင်းသည်ကိုကင်းကိုယ်တိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလျှော့ချပြီး ASIC1A ၏ပြတ်တောက်မှုသည်ကြွက်များတွင် morphine-CPP နှင့်ကိုကင်း -PPP နှစ်ခုစလုံးကိုတိုးမြှင့်စေခဲ့သည် (Kreple et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့် ASIC1A လုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ extracellular pH buffering ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်သောအင်ဇိုင်းကာဗွန်ကာဗွန် anhydrase IV (CA-IV) မှ ASIC1A လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုယူဆရသည် (Kreple et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့်, ASIC1A function ကိုတိုးမြှင့်သောထိုကဲ့သို့သော CA-IV inhibitor acetazolamide အဖြစ်ဒြပ်ပေါင်းများ, ကိုလိုက်နာဖို့အလားအလာခဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
စွဲလမ်းမှုကိုကုသရာတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်ကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာသည် NAc ရှိ NMDAR - မှီခို။ ရသောပလပ်စတစ်ဆေးတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ (D'Ascenzo et al ။ , 2014) ။ NAc အတွက် NMDAR- မှီခို Synaptic ပလပ်စတစ်အတွက်လိုငွေပြမှုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့် D-serine အဆင့်ဆင့်ကြောင့်ထင်နေကြသည်ကတည်းက D-serine အချက်ပြပစ်မှတ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ကုသမှုများအတွက်ဂတိတော်ကိုကိုင်လိမ့်မည်။ D-serine အဆင့်များကိုဥပမာအားဖြင့် D-serine ကိုပျက်စီးစေသောအင်ဇိုင်းအက်စစ် - အမိုင်နိုအက်စစ် oxidase ၏တားစီးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည် (D'Ascenzo et al ။ , 2014) ။ ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်အထိ D-serine ၏အခန်းကဏ္onlyကိုကိုကင်းစွဲလမ်းမှုတွင်သာလေ့လာခဲ့သည်။ အခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲစေရန် D-serine တွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိကိုမူမသိရှိရသေးပါ။
များသောအားဖြင့်ဆေးကုသမှုအတော်များများသည်ပြန်လည်ကုသမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်အောင်မြင်မှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် relapse နှုန်းကိုလျှော့ချဖို့အာရုံစိုက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများအလားအလာလိမ့်မည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရာတွင် mPFC ၏အခန်းကဏ္ Given ကြောင့်အသစ်ကုသမှုနည်းဗျူဟာများသည် dorsal mPFC တွင်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ် ventral mPFC တွင် glutamatergic transmission တိုးမြှင့်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အထူးသဖြင့်, GluA2 ပါဝင်သော AMPARs ၏ cue- သွေးဆောင် endocytosis တားစီးသောအေးဂျင့်များ relapse တားဆီးဖို့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကို TAT peptide, TAT-GluR2 ဖြင့်ကြွက် mPFC တွင်ပြုလုပ်သည်3γ (ဗန်ဒင် Oever et al ။ , 2008GluA2 ပါ ၀ င်သည့် AMPAR endocytosis နှင့်ဤကြွက်များတွင်ရှာဖွေသည့် cue- သွေးဆောင်သည့်ဘိန်းဖြူတို့ကိုတားဆီးပေးသော) ။
dorsal mPFC တွင်လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချမည့်အစား cue- သွေးဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာ NAc ရှိ glutamatergic mPFC-to-NAc synapses တွင်ဤလုပ်ဆောင်မှု၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထုတ်ယူသည့်အခါ၊ NAc ရှိ extracellular glutamate ပမာဏသည်လျော့နည်းသွားပြီး၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် mPFC-to-NAc synapses တွင်ထုတ်လွှတ်သည့် glutamate ပမာဏကိုတိုးစေသည် (Gipson et al ။ , 2014) ။ ထို့အပြင်လျှော့ချ GLT-1 အဆင့်များသည် synapses မှအချိုမှုစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ GLT-1 နှင့် extracellular glutamate အဆင့်များကိုပြန်ယူခြင်းသည် cue-induced relapse ကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ GLT-1 နှင့် NAc ရှိ extracellular glutamate ပမာဏကိုပြန်လည်ပေးသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုမှာ anti-oxidant N-acetylcysteine ​​(NAC; Gipson et al ။ , 2014) ။ NAC ကုသမှုကိုလူ့စွဲလမ်းသူများနှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချစေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် (LaRowe et al ။ , 2007; Mardikian et al ။ , 2007).
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်ဆေးစွဲခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဇွဲရှိမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှတစ်ဆင့် Synaptic ပလပ်စတစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတသည်အပြည့်အ ၀ မရောက်သေးသော်လည်း၊ mesocorticolimbic ဒေသများရှိ glutamatergic synaptic plasticity သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ (Figure1) .1) ။ အစပိုင်း၌စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် VTA တွင် Synaptic ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ VTA DA အာရုံခံများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနိမ့်နိမ့်လျှပ်ကူး GluA2 ပါဝင်သော AMPARs လဲလှယ်အတွက်မြင့်မားသော conductor GluA2- ချို့တဲ့ AMPARs ၏ Synaptic သွင်းမှုရလဒ်များ။ VTA ၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်နောက်ပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိတွေ့ခြင်း (ဥပမာ NAc, PFC နှင့် amygdala ကဲ့သို့) mesocorticolimbic စနစ်၏မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကား synaptic လိုက်လျောညီထွေထို့နောက်စွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာသောအမူအကျင့်လက္ခဏာတွေအများအပြားဖျန်ဖြေ။ အစောပိုင်းဆေးကုသမှုခံယူစဉ် NAc တွင် AMPAR / NMDAR အချိုးလျော့နည်းလာခြင်းကဆေးကိုပျော်ရွှင်ရန်လိုအပ်သောခံစားချက်များကိုအာရုံခံဆဲလ်များကိုသဘာဝအရအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအထိခိုက်မခံအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ AMPAR ဂီယာ၏တဖြည်းဖြည်းတက်ကြွမှု၊ တိတ်တဆိတ်တိတ်တဆိတ်ရင့်ကျက်မှုနှင့် NAc ရှိ Basal extracellular glutamate အဆင့်များသည် NAc ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအပေါ်တုန့်ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် cue- သွေးဆောင်မှုတွန်းအား၏ဖော်ပြမှုကိုဖြန်ဖြေပေးသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင် sync ၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ (နှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ) ကို NAc core နှင့် shell နှစ်ခုလုံးတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးထားသည်။ ဤအလုပ်လုပ်သောပုံစံတွင် NAc core နှင့် shell ၏အခန်းကဏ္dissကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်။ PFC ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်သည့် Synaptic လိုက်လျောညီထွေမှုများသည် relapse တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါ ventral mPFC အတွက်လျင်မြန်စွာ cue- သွေးဆောင် Synaptic စိတ်ကျရောဂါအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းမှထပ်မံဖြစ်ဖျန်ဖြေမူးယစ်ဆေး - ဆက်စပ်တွေကိုထိတွေ့အပေါ်သို့တုံ့ပြန်မှုတားစီးချို့ယွင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင် dorsal mPFC တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော neuroadaptations သည်ဤဒေသခွဲမှ NAc core သို့မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုမောင်းနှင်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် mesocorticolimbic စနစ်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး - သွေးဆောင် Synaptic ပလပ်စတစ်၏အခန်းကဏ္ofကို၏အလုပ်လုပ်မော်ဒယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပလတ်စတစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော mesocorticolimbic ဦး နှောက်ofရိယာများ၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအစီအစဉ် ...
စွဲလမ်းနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော synaptic အပြောင်းအလဲများသည်များပြားပြီးရှုပ်ထွေးသောကြောင့်ဤလုပ်ငန်းပုံစံကိုအတည်ပြုရန်နှင့်တိုးချဲ့ရန်နောက်ထပ်သုတေသနများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အများအပြားအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကိုဖြေနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်ဖန်တီးထားသော Synaptic plasticity ကိုအဓိကအားဖြင့် VTA နှင့် NAc တွင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် mPFC နှင့် Synapic အပြောင်းအလဲများနှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှတစ်ဆင့်အာရုံပျံ့လွင့်စေသည့်အရာသည်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများတွင်စွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည့် amygdala နှင့် habenula (Maroteaux နှင့် Mameli၊ 2012; ဗန်တွင်း Oever et al ။ , 2012; Lecca et al ။ , 2014), ဘယ်မှာပလပ်စတစ်လည်းအလွန်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ပါတယ်? ဒီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ဆွေးနွေးလေ့လာမှုများအများစုကိုအထူးကိုကင်း - သွေးဆောင် Synaptic plasticity ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည်အခြားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ယေဘုယျဖြစ်ပါသလား။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဆေးအမျိုးအစားများသည် Synaptic transmission (Wolf and Ferrario) အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 2010) ။ အခြားမဖြေရှင်းနိုင်သောပြissueနာတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအားနည်းခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အာရုံကြောအခြေခံဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာသည့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိရိစ္ဆာန်များတွင်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောလေ့လာမှုများသည်စွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်း၏ဆက်စပ်မှုဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည် (Kasanetz et al ။ , 2010; Abrahao et al ။ , 2013) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဦး နှောက်ဒေသအတွင်းရှိအာရုံခံဆဲလ်၏လူ ဦး ရေကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ် (Wolf နှင့် Ferrario, 2010; Creed နှင့်Lüscher, 2013) ။ ကွဲပြားခြားနားသော mesocorticolimbic ဒေသများရှိမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ရောဂါများကိုအာရုံခံဆဲလ်များ၏တိကျသောလူ ဦး ရေ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသောတုံ့ပြန်မှုများသည်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလေ့လာရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Abrahao KP, Ariwodola OJ, Butler TR, Rau AR, Skelly MJ, Carter E. , et al ။ ။ (2013) ။ အီသနောမှ Locomotor sensitization နျူကလိယအတွက် NMDA အဲဒီ receptor- မှီခို Synaptic ပလပ်စတစ် impumbens နှင့်အီသနောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 33, 4834-4842 10.1523 / JNEUROSCI.5839-11.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2013) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: DSM-V ။ 5th Edn, Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။
Argilli အီး, Sibley DR, Malenka RC, အင်္ဂလန် ၀ န်ကြီးချုပ် Bonci A. (2008) ။ Ventral Tegmental inရိယာ၌ကိုကင်း - ကာလရှည်ကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၏ယန္တရားနှင့်အချိန်သင်တန်း။ ဂျေ Neurosci ။ 28, 9092-9100 10.1523 / JNEUROSCI.1001-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bellone C. , Lüscher C. (2006) ။ ကိုကင်း AMPA အဲဒီ receptor ပြန်လည်ခွဲဝေမှု mGluR-မှီခိုရေရှည်စိတ်ကျရောဂါများက Vivo အတွက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 9, 636-641 ။ 10.1038 / nn1682 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bellone C. , Lüscher C. (2012) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောပလတ်စတစ် - စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်မီးမဖွားမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါသလား။ ရှေ့။ mol ။ အာရုံကြော။ 5: 75 10.3389 / fnmol.2012.00075 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Ben-Shahar O. , Obara ဗြဲ, Ary AW, Ma N. , Mangiardi MA, Medina RL ။ ။ (2009) ။ ကိုကင်းမှနေ့စဉ်ရရှိမှုတိုးချဲ့မှုသည် medial prefrontal cortex အတွင်းရှိ Homer 1b / c နှင့် NMDA receptor subunit expression များတွင်ကွဲပြားသောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Synapse 63, 598-609 ။ 10.1002 / syn.20640 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bocklisch C. , Pascoli V. , Wong JCY, House DRC, Yvon C. , de Roo အမ်။ ။ (2013) ။ ကိုကင်းသည် ventral tegmental inရိယာ၌ GABA ဂီယာကူးစက်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းဖြင့် dopamine အာရုံခံများကိုတားဆီးသည်။ သိပ္ပံ 341, 1521-1525 ။ 10.1126 / သိပ္ပံပညာ.1237059 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Borgland SL, Malenka RC, Bonci A. (2004) အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ၌ synaptic အစှမျးသတ်တိ၏ပြင်းထန်သောနှင့်နာတာရှည်ကိုကင်း - သွေးဆောင် potentiation: တစ် ဦး ချင်းစီကြွက်များတွင် electrophysiological နှင့်အပြုအမူဆက်စပ်မှု။ ဂျေ Neurosci ။ 24, 7482-7490 10.1523 / jneurosci.1312-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boudreau AC အ, Wolf က ME (2005) ။ ကိုကင်းမှအပြုအမူ sensitization အဆိုပါနျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် AMPA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 25, 9144-9151 10.1523 / jneurosci.2252-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brebner K. , Wong TP, Liu L. , Liu Y. , Campsall P. , Grey S. , et al ။ ။ (2005) ။ Nucleus သည်ရေရှည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုခုံမင်သည်။ သိပ္ပံ 310, 1340-1343 ။ 10.1126 / သိပ္ပံပညာ.1116894 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Cahill အီး, Pascoli V. , Trifilieff P. , Savoldi,, Kappès V. , Luscher C. ။ ။ (2014) ။ အဆိုပါ striatum အတွက် D1R / GluN1 ရှုပ်ထွေးသော synaptic ပလပ်စတစ်နှင့်ကိုကင်း - တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် dopamine နှင့်အချိုမှုအချက်ပြပေါင်းစပ်။ mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 19, 1295-1304 10.1038 / mp.2014.73 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen BT, Bowers MS, Martin M. , Hopf FW, Guillory AM, Carelli RM, et al ။ ။ (2008) ။ ကိုကင်းသည်သဘာဝစီမံချက်မဟုတ်ဘဲမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုနှင့် passive cocine ပြုတ်ရည်များသည် VTA တွင်မြဲမြံသော LTP ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Neuron 59, 288 – 297 10.1016 / j.neuron.2008.05.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Conde V. , Vollmann အိပ်ချ်, Taubert အမ်, ရှေခ, Cohen LG, Villringer အေ။ ။ (2013) ။ interhemispheric interaction ကမှတဆင့်လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာအချိန်ကိုက် - မှီခိုဆက်စပ်မှုပလပ်ပြောင်းပြန်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 109, 2260-2271 10.1152 / jn.01004.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Conrad KL, Tseng KY, Uejima JL, Reimers JM, Heng L.-J. , Shaham Y. , et al ။ ။ (2008) ။ accumbens GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား mediates ။ သဘာဝတရား 454, 118-121 ။ 10.1038 / nature06995 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cornish က JL, Kalivas PW (2000) ။ အက်တမ်ဘင်၏နျူကလိယမှအချိုမှုန့်သည်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအားပြန်လည်သက်သာစေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 20, 1-5 [PubMed]
Couey JJ, Meredith RM, Spijker S. , Poorthuis RB, Smit AB, Brussaard AB, et al ။ ။ (2007) ။ နီကိုတင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောကွန်ယက်လုပ်ဆောင်မှုများသည် prefrontal cortex တွင် spike-time-dependant plasticity အတွက်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ Neuron 54, 73 – 87 10.1016 / j.neuron.2007.03.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Counotte DS, Goriounova NA, Li KW, Loos M. , van der Schors RC, Schetters D. , et al ။ ။ (2011) ။ မြဲမြံစွာပြောင်းလဲခြင်းသည်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာရုံစူးစိုက်မှုအားအခြေခံသည်။ နတ် အာရုံကြော။ 14, 417-419 10.1038 / nn.2770 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Counotte DS, Goriounova NA, Moretti အမ်၊ Smoluch MT, Irth H. , Clementi F. ။ (2012) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နီကိုတင်းထိတွေ့မှုသည်မြင့်မားသောအားရမှုနီကိုတင်းဓာတ်များကိုတိုးပွားစေသည်နှင့်ကြွက် medial prefrontal cortex တွင် inhibitory synaptic transmission ကို modulates ။ FASEB ဂျေ 26, 1810-1820 ။ 10.1096 / fj.11-198994 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Counotte DS, Spijker S. , Van de Burgwal LH, Hogenboom အက်ဖ်၊ Schoffelmeer ANM, De Vries TJ, et al ။ ။ (2009) ။ ကြွက်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းဓာတ်ထိတွေ့မှုကြောင့်ရရှိလာသောကြာရှည်သိမှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှု။ Neuropsychopharmacology 34, 299-306 ။ 10.1038 / npp.2008.96 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Creed MC, Lüscher C. (2013) ။ မူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: metaplasticity ကျော်လွန်ပြီး။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 23, 553-558 ။ 10.1016 / j.conb.2013.03.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Curcio L. , Podda MV, Leone L. , Piacentini R. , Mastrodonato အေ, Cappelletti P. , et al ။ ။ (2013) ။ ကိုကင်းကုသကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် D-serine အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ NMDA အဲဒီ receptor- မှီခို synaptic plasticity ၏သော induction ဆီးတား။ ဦး နှောက် 136, 1216-1230 ။ 10.1093 / ဦး နှောက် / awt036 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
D'Ascenzo အမ်, Podda MV, Grassi C. (2014) အဆိုပါနျူကလိယအတွက် NMDA receptors ၏ Co-agonist အဖြစ် D-serine ၏အခန်းကဏ္umbကို: စွဲစွဲဆက်စပ်မှု။ ရှေ့။ Synaptic Neurosci ။ 6: 16 10.3389 / fnsyn.2014.00016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
De Beaumont L. , Tremblay S. , Poirier J. , Lassonde အမ်၊ Théoret H. (2012) ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်ပလတ်စတစ်နှင့်အပြိုင်အဆိုင်အားကစားသမားများအတွက်သွယ်ဝိုက်မော်တာလေ့လာခြင်းကိုလျှော့ချသည်။ Cereb ။ Cortex 22, 112-121 ။ 10.1093 / cercor / bhr096 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ, Imperato အေ (1988) ။ လူသားများအလွဲသုံးစားပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် mesolimbic system တွင် synaptic dopamine ပါဝင်မှုကိုတိုးစေပြီးကြွက်များအားလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားစေနိုင်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ ယူအက်စ်အေ 85, 5274-5278 ။ 10.1073 / pnas.85.14.5274 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dong Y. , Nestler EJ (2014) ။ ကိုကင်းစွဲ၏အာရုံကြောပြန်လည်နုပျိုခြင်းအယူအဆ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ 35, 374-383 10.1016 / j.tips.2014.05.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
EMCDDA (2013) ။ ဥရောပမူးယစ်ဆေးဝါးအစီရင်ခံစာ 2013 ။ : မှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင် http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_213154_EN_TDAT13001ENN1.pdf.
Engblom ဃ, ဘေလ်ဘောင်အေ, Sanchis-Segura et al C. , Dahan L. , Perreau-Lenz အက်စ်, Balland ခ။ ။ (2008) ။ dopamine အာရုံခံအပေါ်အချိုမှု receptors ကင်းရှာ၏ဇွဲထိန်းချုပ်ထားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 59, 497-508 ။ 10.1016 / j.neuron.2008.07.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fitzgerald LW, Ortiz ဂျေ၊ Hamedani AG၊ Nestler EJ (1996) ။ ကြွက်များ၏ ventral tegmental inရိယာ၌အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ GluR1 နှင့် NMDAR1 glutamate receptor subunits များ၏အသုံးအနှုနျးကိုတိုးမြှင့်: Cross-sensitizing အေးဂျင့်များအကြားဘုံလိုက်လျောညီထွေ။ ဂျေ Neurosci ။ 16, 274-282 [PubMed]
Gabbott PL, Warner TA, Jays PRL, Salway P. , Busby SJ (2005) ။ ကြွက်များတွင် prefrontal cortex: subcortical ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, မော်တာနှင့် limbic စင်တာများရန်။ ဂျေ Comp ။ Neurol ။ 492, 145-177 10.1002 / cne.20738 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gipson CD၊ Kupchik YM, Kalivas PW (2014) ။ စွဲအတွက်လျင်မြန်စွာ, ယာယီ synaptic plasticity ။ Neuropharmacology 76 (Pt ။ B), 276-286 ။ 10.1016 / j.neuropharm.2013.04.032 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gipson CD, Kupchik YM, Shen H. , Reissner KJ, Thomas CA, Kalivas PW (2013a) ကိုကင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များကြောင့်သွေးပြန်ကြောသည်လျင်မြန်စွာကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ Neuron 77, 867 – 872 10.1016 / j.neuron.2013.01.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gipson CD, Reissner KJ, Kupchik YM, Smith ACW, Stankeviciute N. , Hensley-Simon ME, et al ။ ။ (2013b) ။ နီကိုတင်းရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသည် glutamatergic plasticity ဖြင့်ဖျန်ဖြေပေးသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ ယူအက်စ်အေ 110, 9124-9129 ။ 10.1073 / pnas.1220591110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goriounova NA, Mansvelder HD (2012) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းနီကိုတင်းထိတွေ့မှုသည်ကြွက် prefrontal cortex တွင် spike time-dependence plasticity သို့ရေတိုနှင့်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 32, 10484-10493 10.1523 / JNEUROSCI.5502-11.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grimm JW, Hope BT, Wise RA, Shaham Y. (2001) ။ နေပြည်တော်။ နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား။ သဘာဝ 412၊ 141 – 142 10.1038 / 35084134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Groenewegen HJ, Wright CI, Beijer AV, Voorn P. (1999) ။ ventral striatal သွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များ၏ convergence နှင့်အသားအရောင်ခွဲခြား။ အမ်း နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ 877, 49-63 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb09260.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grundey ဂျေ၊ Thirugnanasambandam N. , Kaminsky K. , Drees အေ, Skwirba AC, Lang N. , et al ။ ။ (2012) ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင် Neuroplasticity ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ နီကိုတင်းဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ ဂျေ Neurosci ။ 32, 4156-4162 10.1523 / JNEUROSCI.3660-11.2012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heidbreder, CA, Groenewegen HJ (2003) ။ ကြွက်များတွင်အဆိုပါ medial prefrontal cortex: အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ dorso-ventral ဂုဏ်ထူးဘို့သက်သေသာဓက။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 27, 555-579 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2003.09.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟူးဗားဒဗလျူ, Vertes R. (2007) ။ ကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex မှ afferent စီမံကိန်း၏ခန္ဓာဗေဒခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦး နှောက် Struct ။ စိတ်ကျရောဂါ 212, 149-179 10.1007 / S00429-007-0150-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Huang YH, Lin Y. , Mu P. , Lee BR, Brown TE, Wayman G. et al ။ ။ (2009) ။ in vivo အကင်းအတွေ့အကြုံသည်တိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်သော synapses ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuron 63, 40 – 47 10.1016 / j.neuron.2009.06.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Isaac JTR, Ashby MC, McBain CJ (2007) ။ AMPA အဲဒီ receptor function ကိုနှင့် Synaptic plasticity အတွက် GluR2 subunit ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Neuron 54, 859 – 871 10.1016 / j.neuron.2007.06.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Isaac JT, Nicoll RA, Malenka RC (1995) ။ အသံတိတ် synapses များအတွက်အထောက်အထား: LTP ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuron 15, 427 – 434 10.1016 / 0896-6273 (95) 90046-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျွန်ဆင် SW, North RA (1992) ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် Opioids သည် dopamine အာရုံခံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 12, 483-488 [PubMed]
Kalivas PW (2009) ။ စွဲလမ်းမှု၏အချိုမှု homeostasis ယူဆချက်။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 10, 561-572 ။ 10.1038 / nrn2515 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Churchill L. , Klitenick MA (1993) ။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens နှင့် ventral pallidum ကနေ GABA နှင့် enkephalin စီမံကိန်း ventral tegmental areaရိယာရန်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 57, 1047-1060 ။ 10.1016 / 0306-4522 (93) 90048-k [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kasanetz အက်ဖ်, Deroche-Gamonet V. , Berson N. , Balado အီး, Lafourcade အမ်, Manzoni O. , et al ။ ။ (2010) ။ ဆေးစွဲရန်အကူးအပြောင်းသည်ပလတ်စတစ်အရိပ်အောက်ရှိချွတ်ယွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံ 328, 1709-1712 ။ 10.1126 / သိပ္ပံပညာ.1187801 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knackstedt LA, Melendez RI, Kalivas PW (2010) ။ Ceftriaxone သည်အချိုမှုန့် homeostasis ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးကိုကင်းရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 67, 81-84 10.1016 / j.biopsych.2009.07.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koch G. အ, Ponzo V. , Di Lorenzo F. , Caltagirone C. , Veniero ie (2013) လူ့ cortico-cortical ဆက်သွယ်မှုများ၏ဟေဗြဲနှင့် hebbian ဆန့်ကျင် - အချိန်ကိုက် - မှီခိုပလပ်စတစ်။ ဂျေ Neurosci ။ 33, 9725-9733 10.1523 / JNEUROSCI.4988-12.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kourrich အက်စ်, Rothwell PE, Klug JR, သောမတ်စ် MJ (2007) ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် bidirectional synaptic ပလပ်စတစ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဂျေ Neurosci ။ 27, 7921-7928 10.1523 / jneurosci.1859-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koya အီး, Cruz FC၊ Ator R. , Golden SA, Hoffman AF, Lupica CR, et al ။ ။ (2012) ။ ရွေးချယ် activated နျူကလိယအတွက်အသံတိတ် synapses ကိုကင်း sensitization အောက်ပါအာရုံခံဆဲလ် accumbens ။ နတ် အာရုံကြော။ 15, 1556-1562 10.1038 / nn.3232 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koya အီး, Golden SA, Harvey BK, Guez-Barber DH, Berkow အေ, Simmons DE, et al ။ ။ (2009) ။ ကိုကင်း - activated နျူကလိယ၏ပစ်မှတ်ထားနှောင့်အယှက်အာရုံခံ accumbens အခြေအနေတွင် - တိကျတဲ့ sensitization ကာကွယ်ပေးသည်။ နတ် အာရုံကြော။ 12, 1069-1073 10.1038 / nn.2364 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Kreple CJ, Lu Y. , Taugher RJ, Schwager-Gutman AL, Du J. , Stump အမ်။ ။ (2014) ။ Acid-sensing အိုင်းလိုင်းများသည် synaptic ဂီယာကိုအထောက်အကူပြုသည်။ နတ် အာရုံကြော။ 17, 1083-1091 10.1038 / nn.3750 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
LaLumiere RT, Smith KC, Kalivas PW (2012) ။ ကိုကင်းရှာဖွေခြင်းအတွက်အာရုံကြောပတ် ၀ န်းကျင်ပြိုင်ဆိုင်မှု - infralimbic cortex နှင့် nucleus accucens ၏အခန်းကဏ္။ ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci ။ 35, 614-622 10.1111 / j.1460-9568.2012.07991.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lammel အက်စ်၊ Ion DI၊ Roeper ဂျေ၊ Malenka RC (2011) ။ aversive နှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ၏စီမံကိန်း - တိကျတဲ့မော်ဂျူ။ Neuron 70, 855 – 862 10.1016 / j.neuron.2011.03.025 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lammel အက်စ်, Lim BK, Malenka RC (2013) ။ တစ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော midbrain dopamine စနစ်အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်မနှစ်သက်။ Neuropharmacology 76, 351-359 ။ 10.1016 / j.neuropharm.2013.03.019 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Lammel အက်စ်, Lim BK, Ran C. , Huang KW, Betley MJ, Tye KM ။ ။ (2012) ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ၌ဆုလာဘ်များနှင့်မနှစ်သက်၏ input ကို - တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ 491၊ 212 – 217 10.1038 / သဘာ ၀11527 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al LaRowe SD က, Myrick အိပ်ချ်, Hedden အက်စ်, Mardikian PN, Saladin အမ်, McRae အေ။ ။ (2007) ။ ကိုကင်းအလိုဆန္ဒကို N-Acetylcysteine ​​မှလျှော့ချသလား။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 164, 1115-1117 ။ 10.1176 / ajp.2007.164.7.1115 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lecca အက်စ်, Meye FJ, Mameli အမ် (2014) ။ စွဲနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် habenula: တစ်ခုခန္ဓာဗေဒ, Synaptic နှင့်အမူအကျင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci ။ 39, 1170-1178 10.1111 / ejn.12480 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee က BR, Ma Y.-Y. , Huang က YH, ဝမ် X တို့မှာ, Otaka အမ်, Ishikawa အမ်, et al ။ ။ (2013) ။ amygdala-accumbens စီမံကိန်းများတွင်အသံတိတ် synapses ၏ရင့်ကျက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွားစေတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 16, 1644-1651 ။ 10.1038 / nn.3533 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူ Q.-S. , Pu L. , Poo M.-M. (2005) ။ ထပ်ခါတလဲလဲ Vivo တွင်ကိုကင်းထိတွေ့မှုသည် midbrain dopamine neuron များ၌ LTP သောသော့မှုများကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သဘာဝ 437၊ 1027 – 1031 10.1038 / သဘာ ၀04050 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူးအိပ်ချ်, Cheng P.-L. , Lim BK, Khoshnevisrad N. , Poo M.-M. (2010) ။ ကိုကင်းထုတ်ယူပြီးနောက် BDNF မြင့်တက်ခြင်းသည် GABA တားစီးမှုကိုနှိမ်နင်းခြင်းဖြင့် medial prefrontal cortex တွင် LTP ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ Neuron 67, 821 – 833 10.1016 / j.neuron.2010.08.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူး M.-K. , Tsai C.-H. , Ziemann U. (2012) မော်တာ cortex မှ Cerebellum တွဲဖက်ထားသောလှုံ့ဆော်မှုသည်လူ့မော်တာ cortex တွင်ဘက်လိုက်သော STDP ကဲ့သို့သောပလပ်စတစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရှေ့။ ဟမ် အာရုံကြော။ 6: 260 10.3389 / fnhum.2012.00260 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lüscher C. (2013) မူးယစ်ဆေးဝါးနှိုးဆွပေးသောပလပ်စတစ်သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 33, 17641-17646 10.1523 / JNEUROSCI.3406-13.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lüscher C. , Malenka RC (2011) ။ မူးယစ်ဆေး - evoked စွဲအတွက် synaptic ပလပ်စတစ်: မော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုကနေဆားကစ် remodeling ရန်။ Neuron 69, 650 – 663 10.1016 / j.neuron.2011.01.017 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Luu P. , Malenka RC (2008) Ventral Tegmental inရိယာ dopamine ဆဲလ်များတွင် Spike Timing-dependant long-term potentiation PKC လိုအပ်သည်။ ဂျေ Neurophysiol ။ 100, 533-538 10.1152 / jn.01384.2007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mameli အမ်, Balland ခ, Luján R. , Lüscher C. (2007) ။ လျင်မြန်သောပေါင်းစပ်နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ mGluR-, LTD များအတွက် GluR2 ၏ Synaptic သွင်း။ သိပ္ပံ 317, 530-533 ။ 10.1126 / science.1142365 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mameli အမ်, Bellone C. , ဘရောင်း MTC, Lüscher C. (2011) ။ ကိုကင်းသည် ventral tegmental inရိယာ၌အချိုမှုန့်ထုတ်လွှတ်မှု၏ synaptic plasticity အတွက်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းသည်။ နတ် အာရုံကြော။ 14, 414-416 10.1038 / nn.2763 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mameli အမ်, Halbout ခ, Creton C. , Engblom ဃ, Parkitna JR, Spanagel R. , et al ။ ။ (2009) ။ ကိုကင်း-evoked Synaptic plasticity: အ VTA အတွက်ဇွဲအဆိုပါ NAc in adapter တစ်ခုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 1036-1041 ။ 10.1038 / nn.2367 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mansvelder HD၊ Keath JR၊ McGehee DS (2002) ။ Synaptic ယန္တရားများသည် ဦး နှောက်ဆုလာဘ်areasရိယာများ၏နီကိုတင်း - သွေးဆောင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအခြေခံသည်။ Neuron 33, 905 – 919 10.1016 / S0896-6273 (02) 00625-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mansvelder HD၊ McGehee DS (2000) ။ နီကိုတင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများရှိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သွင်းအားစုများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuron 27, 349 – 357 10.1016 / S0896-6273 (00) 00042-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mao D. , Gallagher K. , McGehee DS (2011) ။ ventral tegmental dရိယာ dopamine အာရုံခံမှ excitatory သွင်းအားစု၏နီကိုတင်း potentiation ။ ဂျေ Neurosci ။ 31, 6710-6720 10.1523 / JNEUROSCI.5671-10.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mardikian PN, LaRowe SD, Hedden အက်စ်၊ Kalivas PW, Malcolm RJ (2007) ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမ်းသပ်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 31, 389-394 10.1016 / j.pnpbp.2006.10.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maroteaux အမ်၊ မားမီအမ် (2012) ။ ကိုကာကိုးနှစ် ဦး နှစ်ဖက် habenula အာရုံခံ၏စီမံကိန်း - တိကျတဲ့ Synaptic plasticity evokes ။ ဂျေ Neurosci ။ 32, 12641-12646 10.1523 / JNEUROSCI.2405-12.2012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martin M. , Chen BT, Hopf FW, Bowers MS, Bonci A. (2006) ။ ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသည်နျူကလိယနျူကလီး၏ဗဟိုတွင် LTD ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ နတ် အာရုံကြော။ 9, 868-869 10.1038 / nn1713 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maskos U. , Molles BE, Pons S. , Besson အမ်၊ Guiard BP, Guilloux JP, et al ။ ။ (2005) ။ နီကိုတင်းဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်သိမှတ်မှုကိုနီကိုတင်းဓာတ်လက်ခံစက်များအားပစ်မှတ်ထားဖော်ပြခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ သဘာဝ 436၊ 103 – 107 10.1038 / သဘာ ၀03694 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mato အက်စ်, Chevaleyre V. , Robbe,, Pazos အေ, Castillo PE, Manzoni OJ (2004) ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 9THC ၏ထိတွေ့မှုတစ်ခုတွင်တစ်ခုတည်းသော endocannabinoid-mediated synaptic plasticity ။ နတ် အာရုံကြော။ 7, 585-586 10.1038 / nn1251 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Moussawi K. , Pacchioni အေ, Moran M. , Olive MF, Gass JT, Lavin အေ။ ။ (2009) ။ N-Acetylcysteine ​​သည်ကိုကင်း - သွေးဆောင် metaplasticity ကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ နတ် အာရုံကြော။ 12, 182-189 10.1038 / nn.2250 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Niehaus JL၊ Murali အမ်၊ Kauer ဂျာ (2010) ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ventral tegmental inရိယာ၌ inhibitory synapses တွင် LTP ကိုထိခိုက်စေသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci ။ 32, 108-117 10.1111 / j.1460-9568.2010.07256.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pascoli V. , တယ်ရီယာဂျေ, Espallergues ဂျေ, Valjent အီး, O'Connor EC, Lüscher C. (2014) ။ relapse ၏ကင်း-evoked plasticity ထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများပုံစံများကိုနှိုငျးယှဉျ။ သဘာဝတရား 509, 459-464 ။ 10.1038 / nature13257 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pascoli V. , Turiault အမ်, Lüscher C. (2012) ။ ကိုကင်း-evoked Synaptic အလားအလာပြောင်းပြန်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သပ္ပါယ်အပြုအမူ reset လုပ်တယ်။ သဘာဝတရား 481, 71-75 ။ 10.1038 / nature10709 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပီတာဂျေ, LaLumiere RT ကို, Kalivas PW (2008) ။ Infralimbic prefrontal cortex ငြိမ်းအေးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်းဟန့်တားဘို့တာဝန်ရှိသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 6046-6053 ။ 10.1523 / JNEUROSCI.1045-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပင်းအေ, ရှီဂျေ, ပရာဆတ် BM, ဝမ် MH, Kruzich PJ (2008) ။ နျူကလိယ၏ပံ့ပိုးမှုများကို AMPA- အတွက် AMPA receptors င် core ကိုနှင့် shell ကို GluR1 accumbens နှင့်ကိုကင်း - ရှာဖွေနေအပြုအမူ၏ကိုကင်း - primed ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Brain Res ။ 1215, 173-182 10.1016 / j.brainres.2008.03.088 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ (2004) ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology 47 (Suppl ။ 1), 33-46 10.1016 / j.neuropharm.2004.06.025 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Saal D. , Dong Y. , Bonci အေ, Malenka RC (2003) ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသည် dopamine neuron များတွင် synaptic adaptation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neuron 37, 577 – 582 10.1016 / S0896-6273 (03) 00021-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schramm-Sapyta NL, Olsen CM, Winder DG (2006) ။ ကိုကာကိုလာကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကမောက်ကလာပ်စည်း accumbens ခွံတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology 31, 1444-1451 ။ 10.1038 / sj.npp.1300918 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (1998) ။ dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 80, 1-27 ။ [PubMed]
Shen H.-W. , Scofield MD, Boger အိပ်ချ်, Hensley အမ်၊ Kalivas PW (2014) ။ ချို့ယွင်းသောအချိုမှုစားသုံးမှုကြောင့် Synaptic glutamate ယိုဖိတ်မှုကဘိန်းဖြူကိုပြန်လည်သက်သာစေပါတယ်။ ဂျေ Neurosci ။ 34, 5649-5657 10.1523 / JNEUROSCI.4564-13.2014 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stefan K. , Kunesch အီး, Benecke R. , Cohen LG, Classen J. (2002) ။ Interventional တွဲ Associative stimulation အားဖြင့်သွေးဆောင်လူ့မော်တာ cortex စိတ်လှုပ်ရှား၏တိုးမြှင့်၏ယန္တရားများ။ ဂျေ Physiol ။ 543, 699-708 10.1113 / jphysiol.2002.023317 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stefan K. , Kunesch အီး, Cohen LG, Benecke R. , Classen J. (2000) ။ တွဲဖက်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လူ့မော်တာ cortex အတွက်ပလပ်စတစ်၏ induction ။ ဦး နှောက် 123, 572-584 ။ 10.1093 / ဦး နှောက် / 123.3.572 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steffensen SC, Svingos AL, Pickel VM, Henriksen SJ (1998) ။ အဆိုပါ ventral tegmental inရိယာ၌ GABAergic အာရုံခံ၏ Electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ဂျေ Neurosci ။ 18, 8003-8015 [PubMed]
Sun ကဒဗလျူ, ရေဗက္က GV (2006) ။ ထပ်ခါတလဲလဲမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက် prefrontal cortex တွင်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေသည်။ ဂျေ Neurosci ။ 26, 8004-8008 10.1523 / jneurosci.1413-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Swanson LW (1982) ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသများ၏စီမံကိန်း: ကြွက်များတွင်ပေါင်းစပ်ချောင်း retrograde tracer နှင့် immunofluorescence လေ့လာမှု။ Brain Res ။ နွား။ 9, 321-353 10.1016 / 0361-9230 (82) 90145-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Szabo ခ, Siemes အက်စ်, Wallmichrath ဗြဲ (2002) ။ cannabinoids အားဖြင့် ventral tegmental inရိယာ၌ GABAergic neurotransmission ၏တားစီး။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Neurosci ။ 15, 2057-2061 10.1046 / j.1460-9568.2002.02041.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Tan KR, ဘရောင်းအမ်, Labouèbe G. အ, Yvon C. , Creton C. , Fritschy J.-M. ။ (2010) ။ benzodiazepines ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်း။ သဘာဝ 463၊ 769 – 774 10.1038 / သဘာ ၀08758 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တန်ဒဗလျူ, ယ်စလီအမ်, Freeman က WM, Liang ခ, Hemby SE (2004) ။ ကြွက်များတွင်မူးရူးကင်း Self- အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း ionotropic အချိုမှု receptor subunits အတွက်ပြောင်းလဲ။ ဂျေ Neurochem ။ 89, 1021-1033 10.1111 / j.1471-4159.2004.02392.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Testa-Silva G. အ, Verhoog MB, Goriounova NA, Loebel A. , Hjorth J. , Baayen JC ။ ။ (2010) ။ လူ့ synapses များသည် spike-time-dependant plasticity အားကျယ်ပြန့်သောယာယီ ၀ င်းဒိုးကိုပြသည်။ ရှေ့။ Synaptic Neurosci ။ 2: 12 10.3389 / fnsyn.2010.00012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Testa-Silva G. အ၊ Verhoog MB၊ Linaro,၊ de Kock CP၊ Baayen JC, Meredith RM, et al ။ ။ (2014) ။ လူ့ neocortex တွင်မြင့်မားသော bandwidth synaptic communication နှင့် frequency ကိုခြေရာခံခြင်း။ PLoS Biol ။ 12: e1002007 10.1371 / journal.pbio.1002007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လေ့ MN, Ueki Y. , Koganemaru အက်စ်, Fawi G. အ, Fukuyama အိပ်ချ်, Mima တီ (2010) ။ လှုပ်ရှားမှု -related cortical ဆွလူ့မော်တာပလပ်စတစ်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဂျေ Neurosci ။ 30, 11529-11536 10.1523 / JNEUROSCI.1829-10.2010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ် MJ, Beurrier C. , Bonci အေ, Malenka RC (2001) ။ အဆိုပါနျူကလိယအတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ accumbens: ကိုကင်းမှအမူအကျင့် sensitization တစ်အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ နတ် အာရုံကြော။ 4, 1217-1223 10.1038 / nn757 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Tolu အက်စ်, Eddine R. , Marti အက်ဖ်, David V. , Graupner အမ်, Pons S. ။ (2013) ။ VTA DA နှင့် GABA အာရုံခံများပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်နီကိုတင်းအားဖြည့်မှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 18, 382-393 10.1038 / mp.2012.83 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေ (2001) ။ Vivo အတွက်လူပျိုကင်းထိတွေ့ dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ သဘာဝတရား 411, 583-587 ။ 10.1038 / 35079077 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရုံး (2014) ။ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးအစီရင်ခံစာ 2014 ။ Herndon, VA: ကုလသမဂ္ဂထုတ်ဝေမှု။
Van den Oever MC, Goriounova NA, Li KW, van der Schors RC, Binnekade R. , Schoffelmeer ANM, et al ။ ။ (2008) ။ prefrontal cortex AMPA receptor plasticity သည်ဘိန်းဖြူရှာဖွေခြင်းအားဖြင့် cue-induced relapse အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ နတ် အာရုံကြော။ 11, 1053-1058 10.1038 / nn.2165 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Van den Oever MC, Lubbers BR, Goriounova NA, Li KW, van der Schors RC, Loos M. , et al ။ ။ (2010) ။ Extracellular matrix plasticity နှင့် prefrontal cortex pyramidal cell များ GABAergic တားစီးမှုသည်ဘိန်းဖြူရှာဖွေမှုကိုပြန်လည်သက်ရောက်စေပါသည်။ Neuropsychopharmacology 35, 2120-2133 ။ 10.1038 / npp.2010.90 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန်ဒင် Oever MC, Spijker အက်စ်, Smit AB (2012) ။ စမ်းသပ်ဆေးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒတွင် Synaptic ပလပ်စတစ်တိုးတက်မှု၊ “ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ရောဂါလက္ခဏာပြရောဂါ” သည်အယ်ဒီတာများမှ Kreutz MR၊ Sala C. ။ (ဗီယင်နာ: Springer ဗီယင်နာ;), 469-491 ။
Verhoog ကို MB, Goriounova NA, Obermayer ဂျေ, Stroeder ဂျေ, Hjorth JJJ, Testa-Silva G. အ, et al ။ ။ (2013) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ့ neocortical synapses တွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပလတ်စတစ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားများ။ ဂျေ neuroscience ။ 33, 17197-17208 ။ 10.1523 / jneurosci.3158-13.2013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Volkow ND, Fowler JS, Wang G.-J. (2003) ။ အဆိုပါစွဲလူ့ ဦး နှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ 111, 1444-1451 ။ 10.1172 / jci200318533 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Volkow N. လီ T.-K. (2005) ။ စွဲ၏ neuroscience ။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 1429-1430 ။ 10.1038 / nn1105-1429 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Washburn က MS, Dingledine R. (1996) ။ polyamines နှင့် polyamine အဆိပ်အားဖြင့် alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic အက်ဆစ် (AMPA) receptors ၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှု။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 278, 669-678 ။ [PubMed]
Williams JM, Galli အေ (2006) dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: psychostimulant အရေးယူဘို့နိုးနိုးကြားကြားနယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှု။ လက်ကိုင်။ Exp ။ Pharmacol ။ 175, 215-232 ။ 10.1007 / 3-540-29784-7_11 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပညာရှိ RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ Neurosci ။ 5, 483-494 ။ 10.1038 / nrn1406 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wolf ME, Ferrario CR (2010) ။ ကိုကင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်နျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor ပလပ်စတစ် accumbens ။ neuroscience ။ ဇီဝဗေဒ။ ဗျာ 35, 185-211 ။ 10.1016 / j.neubiorev.2010.01.013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wolf ME, Tseng KY (2012) ကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် VTA နှင့်နျူကလိယမှကယ်လ်ဆီယမ်စိမ့်ဝင်နေသော AMPA receptors - မည်သည့်အချိန်တွင်၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ တပ်ဦး။ Mol ။ neuroscience ။ 5: 72 10.3389 / fnmol.2012.00072 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wolters က A. , Sandbrink အက်ဖ်၊ Schlottmann အေ, Kunesch အီး, Stefan K. , Cohen ကို LG, et al ။ ။ (2003) ။ လူ့မော်တာ cortex တွင်ပလပ်စတစ်ကိုအုပ်ချုပ်သောယာယီအချိုးမညီသော Hebbian အုပ်ချုပ်မှု။ ဂျေ Neurophysiol ။ 89, 2339-2345 ။ 10.1152 / jn.00900.2002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Wolters အေ, Schmidt ကအေ, Schramm အေ, Zeller D. , Naumann အမ်, Kunesch အီး။ ။ (2005) ။ လူ့မူလတန်း somatosensory cortex အတွက်အချိန်ကိုက် - မှီခိုပလပ်စတစ်။ ဂျေ Physiol ။ 565, 1039-1052 ။ 10.1113 / jphysiol.2005.084954 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (2008) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောဂါ: 2004 Update ။ ဂျီနီဗာ - ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သတင်း။
Yuan တီ, Mameli အမ်, အို '' Connor EC, Dey PN, Verpelli C. , Sala C. , et al ။ ။ (2013) ။ GluN3A ပါဝင်သော NMDA receptors အားဖြင့်ကိုကင်း-evoked Synaptic plasticity ၏ expression ။ အာရုံခံဆဲလျ 80, 1025-1038 ။ 10.1016 / j.neuron.2013.07.050 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zweifel LS, Argilli အီး, Bonci အေ, Palmiter RD (2008) ။ ပလပ်စတစ်နှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက် dopamine အာရုံခံအတွက် NMDA receptors ၏အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ 59, 486-496 ။ 10.1016 / j.neuron.2008.05.028 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]